TTSweet: October 2011
တစ်ခါတစ်လေ တို့လဲ Tai Tai
Tai tai (太太) isaChinese colloquial term forawealthy married woman who does not work. It is the same as the Cantonese title foramarried woman.
အပေါ်က wiki က ထိုင့်ထိုင် ရဲ့ အဓိပါယ်ကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အန်တီဆွိလဲ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖို့ နဲနဲတောင် လက်တွန့်သွားတယ်။ အဲ နောက်က " It is the same as the Cantonese title foramarried woman." ဆိုမှ သက်ပြင်းချပြီး ဆက်ရေးရတယ်။
ထိုင့်ထိုင်ဆိုတဲ့ စကားကို မြန်မာပြည်မှာနေတုံးက မကြားဖူးခဲ့ဘူး။ စလုံးမှာနေမှ သတင်းစာတွေဖတ်ရင်း၊ တီဗွီတွေကြည့်ရင်း ရင်းနှီးလာတာ။ ဆိုလိုတာကတော့ ပိုက်ဆံအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ business man တွေရဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ အိမ်မှာလဲ အိမ်ဖော်၊ ထမင်းချက်အကူတွေနဲ့ လျှော်ဖွတ်၊ချက်ပြုတ်စရာမလို အားနေ ဈေးဝယ်၊ လည်ပတ်၊ လှလှပပလေး ၀တ်စားပြီး ကျော့ကျော့လေးနေသူ အမျိုးသမီးတွေကို ဆိုလိုတာပါ။
သူတို့အတွက်က ပူပင်စရာဘာမှမရှိ၊ အလုပ်အတွက် stress လဲ မရှိတော့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးများဟာ ထို Tai tai တွေကို သိပ်အားကျတယ်။ ဘယ်သူမဆို အေးအေးဆေးဆေး ဘ၀ပဲ လိုချင်ကြတာချည်းပဲကိုး။ မဆွိတီလဲ အလုပ်ကထွက်မယ်၊ ဆစ်ဒနီဖက်ပြောင်းမယ်၊ အလုပ်လဲ မလုပ်သေးပဲ ယောက်ျားလုပ်စာပဲ ထိုင်စားဦးမယ်ဆိုတော့ HR က ဒါရိုက်တာအပါအ၀င် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက Sweet ကတော့ tai tai ဖြစ်ပြီဆို နောက်ပြောင်ပြီး ပြောကြတယ်။ ကိုယ်ကလဲ tai tai တော့မဟုတ် full time maid သာ ဖြစ်သွားတာပါလို့ ပြန်ပြောခဲ့ဖူးတယ်။
တကယ်တမ်းလဲ အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ဟာ ပြောသလောက် မလွယ်ကူပါဘူး။ မဆွိတီဆို ရောက်စက ပိုဆိုးသေး။ ၈နှစ်၉နှစ်လောက် ကြီးတော်အကူနဲ့ ဘော်ကျော့နေလာခဲ့ပြီး အိမ်အလုပ်တွေက ကိုယ်နဲ့ မရင်းနှီးသေးတော့ တော်တော်ကို ပင်ပမ်းတယ်။ ရောက်စ အထုပ်အပိုးတွေဖြည် အိမ်ကို နေသားတကျဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်နေရတာလဲ ပါတာပေါ့။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ သူကလဲ ရုံးအလုပ်လိုပဲ experience လေး ဘာလေးရလာတော့ တော်တော်သက်သာသွားပါပြီ။
ဒါတောင် တစ်ခါတစ်လေ နေ့စဉ်ဟင်းချက်ရတဲ့အလုပ်၊ ဘာဟင်းချက်ရမလဲ စဉ်းစားရတဲ့ အလုပ်ကို သိပ်ငြီးငွေ့တယ်။ သားအဖ၂ယောက်က စားတဲ့ ဟင်းတွေက မတူတော့ တစ်ယောက်တစ်မျိုး လုပ်ပေးနေရတာ တစ်ခါတစ်လေလဲ စိတ်က တိုချင်တယ်။ အဲဒါဆို ရန်လုပ်ခံရတာက ဦးခြိမ့်က အရင်ပဲ။ တော်တို့ သားအဖ ဟင်းချေးများလို့ ကျုပ်မှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ မီးဖိုချောင်က မထွက်ရဘူး။ တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ဟင်းစော်နံနေတာပဲဆို ပြောမိရင် သူက သူဘာချေးများလို့လဲ ... ကိုယ့်သမီး ကိုယ်နိူင်အောင်ပြောဆို ပြန်ပြောလေ့ရှိတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်တန်းတော့ ဦးခြိမ့်ကချေးမများပဲ ကိုယ်တိုင်ကကို သူလဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားပါစေဆို အပင်ပမ်းခံချက်တာလဲ ပါပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ အဲလိုတွေ ဟင်းစော်တွေနံပြီး ငြီးငွေ့လာရင်တော့ စိတ်လွတ်လပ်လွတ် တစ်ယောက်တည်း ရှော့ပင်းလေး ဘာလေး ပတ်ဖို့ စိတ်ကူးရတယ်။ အဲဒီနေ့က အမှန်က အကြောင်းပြချက်က "ထီး" ခင်ဗျ။ ဦးခြိ်မ့်ရဲ့ နာမည်ကျော် မိသားစုထီးကြီးကလည်း မိုးဒဏ်၊ လေဒဏ်၊ အအေးဒဏ်၊ အပူဒဏ်တွေ ခံရလို့လားမသိ ဆောင်းနေရင်းနဲ့ ပလပ်စတစ်ထီးကိုင်းတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကျိုးကုန်လို့ သမီးကျောင်းအကြိုမှာ မိုးရွာရင်တောင်ဆောင်းစရာ ထီးမရှိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ဦးထုပ်ကလေးကလဲ ၀ယ်ချင်သေးတာဆိုတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီး ဦးခြိမ့်ကို ဖုန်းခေါ်ရတယ်။ များ ခရက်ဒစ်ကတ်ထဲမှာ ငွေထပ်ထည့်ထားသေးလားဆိုတော့ ဟိုနေ့ကပဲတစ်ထောင် ထပ်ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ အိုကေသွားတယ်။ ဦးခြိမ့်က ရုံးကိုကားယူသွားလို့ ကားမရှိပေမဲ့ ဘတ်စ်ကားဂ်ိတ်က အိမ်ဘေးနားတင်ဆိုတော့ တော်တော့်ကို အဆင်ပြေတယ်။ ပိုက်ပိုက် ၂ကျပ်ခွဲတန်လက်မှတ်နဲ့ဆို ဆစ်ဒနီမှာ အကြီးဆုံး Westfield Parramatta Shopping Centre ကို တန်းရောက်တာပဲ။ အန်တီဆွိသွားတဲ့အချိန်က ကားပါးချိန်ဆိုတော့ ၆ မိနစ်လောက်ပဲ စီးရတယ်။ အလဲ့ ဒီ ထိုင့်ထိုင်ကတော့ ဘတ်စကားနဲ့ ရှော့ပင်ပတ်တဲ့ ထိုင့်ထိုင်ပေါ့ဂျာ။ ကြားဖူးကြလား ပိတ်သတ်ကြီး ...
(ပိတ်သတ်မှ တခဲနက်အော်သံ) တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး ...း)
ရှော့ပင်မောကြီးက သိပ်ကြီးတော့ အင်မတန် မျက်စိလည်တတ်တဲ့ အန်တီဆွိက ရောက်ကတည်းက land mark တွေကို တော်တော် မှတ်ထားရတယ်။
ရောက်ရောက်ချင်း မြေညီထပ်မှာပဲ ဟိုနား၊ ဒီနားပတ်ရင်း သမီးအတွက် ဦးထုပ်တစ်လုံး ၀ယ်တယ်။ သမီး အရင်ဦးထုပ်လေး ပျောက်သွားလို့ သူ့ခမြာ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ ခုမှ အစားထိုးဖို့ ပြန်ဝယ်ဖြစ်တော့တယ်။
အင်္ကျီဆိုင် fashion ဆိုင်တွေ အရမ်းပေါတယ်။ အန်တီဆွိတို့ အကြိုက် မွန်းလိုက်ပေါ့ကွယ်။
ဟိုဆိုင်ဝင်၊ ဒီဆိုင်ဝင်၊ ကိုင်ကြည့်ပြီး နောက်ဆုံး ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ 50% ဒစ်ကောင့်ဆိုတာနဲ့ ၃ထည်ဝယ်လိုက်တယ်။ ဟင်း ဘာရမလဲ။ ငှဲ ... ငှဲ
နောက်တော့ Myer မှာ ၀င်ပြီး ဟိုတစ်လောက မ၀ယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ဦးထုပ်ဆိုင်ဖက်သွားပြီး ဦးထုတ်တွေ ရွေးတယ်။ အိမ်က ဘတ်လဘိုင်လိုက်နေတဲ့ထီးကို အစားထိုးဖို့ ထီးတွေလဲရွေးသေးတယ်။ ထီးတွေက ဒီဇိုင်းကလဲ ဒီလောက်မလှပဲနဲ့ ဒေါ်လာ ၃၀-၄၀ဆိုတော့ တော်တော်မတန်တာနဲ့ ထီးတော့ မ၀ယ်ခဲ့တော့ဘူးဂျာ။ ဦးထုပ်တွေ ရွေးလိုက်၊ ဆောင်းကြည့်လိုက်၊ ဈေးနှုံးကြည့်လိုက်နဲ့ အတော်ကြာသွားတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အဲဒါလေး ၀ယ်ခဲ့တယ်။ လှတယ်မဟုတ်လား ပိတ်တတ်ကြီး။ လှပါဒယ် ... လှပါဒယ် ... ...း)
David Jones ကနေ ညက်မှန်လေးလဲ ၀ယ်ခဲ့တယ်။ အန်တီဆွိ လက်ရှိ sunglass က လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကဆိုတော့ ပုံက တော်တော်တုံးနေလို့ ခုခေတ်ပေါ် အ၀ိုင်းခပ်ကြီးကြီး တစ်ခု ၀ယ်လိုက်တယ်။ ဈေးကတော့ ပေါပါသဗျာ။ အဲ ဘေးက ဆွဲကြိုးလေးကလဲ မြင်တော့ မ၀ယ်ရမနေနိူင်တာနဲ့ ၀ယ်ခဲ့ပြန်ပါရော။
အော် မေ့တော့မလို့ ။ Williams ဆိုတဲ့ ဆိုင်က ဖိနပ်ဝယ်ခဲ့သေးတယ်။ ဖိနပ်ကလဲ ရှာနေတာကြာပြီ။ ခုမှပဲ စိတ်ကြိုက်တွေ့တော့တယ်။
၀ယ်ထားတာတွေနဲ့ ဂိုက်ပေးကြမ်းပလိုက်တယ်။ မှတ်ကရေား)
အပြန်ကျ ထီးသွားဝယ်တာ ထီးမေ့တော့မလို့။ နောက်ဆုံး hot dollar လို တိုလီမိုလီ ရောင်းတဲ့ဆိုင်ကနေ မိသားစုဆောင်းလောက်တဲ့ ထီးအကြီးကြီး 11.99 နဲ့ ၀ယ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အကြောင်းပြချက်က ပါမှ ဖြစ်မှာကိုး။ နောက်မှို့ဆို မျက်ညှောင်ကုတ် ... အဲလေ ... ညက်မှောင်ကုတ် ...း)
အမှန်က ဈေးဝယ်တာ တစ်ယောက်ထဲ အေးအေးဆေးဆေး ၀ယ်ရတာ အကောင်းဆုံးပါ။ (ဦးခြိမ့်နဲ့ သွားရင် အဆိုးဆုံး။ သူနဲ့ဆို အေးဆေးမ၀ယ်ရဘူး၊ နောက်ကနေ နွားမောင်းသလို အတင်းမောင်းတော့တာကိုး။ )
အဲဒီနေ့က ပစ္စည်းလေးတွေလဲ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်လေးတွေရခဲ့တယ်။ ဈေးတွေလဲ အရမ်းမများပဲ ရုံးမှာ ပြောနေကျ စကားအတိုင်း ပြောရရင် quality shopping ပါပဲဂျာ။
Posted by T T Sweet at 2:25 PM 38 comments:
iPad/ iPhone/iPod Touch သုံးသူ မိဘများ သတိပြုဖွယ် ***
ထိုနေ့က ဦးမောင်ခြိ်မ့် နောက်ကျမှ အလုပ်ကပြန်လာသည်။ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း
"အမေရေ ညနေက မောင်မျိုး ဆီက SMS လာတယ် .."
" ဟုတ်လား အဖေ ... ဘာတဲ့လဲ ..."
." အဖေလဲ အလုပ်ရှုပ်တာနဲ့ မကြည့်ရသေးဘူး ..."
" အင် ဟုတ်လား ... ဘာများအရေးကြီးလဲ မသိဘူးနော် ... ထမင်းစားပြီးရင် အဖေ ဖုန်းခေါ်လိုက်ဦးလေ..."
"မောင်မျိုး"မှာ စင်္ကာပူမှ အန်တီဆွိ၏မောင်ဝမ်းကွဲ ဖြစ်ပါသည်။ စင်္ကာပူမှ ကိစ္စအ၀၀ကို ကိုယ်မရှိသည့်အချိန်တွင် လုပ်ကိုင်ပေးနေသူဖြစ်ပါသည်။ လစဉ် ရောက်လာသောစာများကို ဖွင့်ဖောက်ပေးခြင်း၊ ငှါးခဲ့သောအိမ်ကို စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ဦးခြိ်မ့် ညစာထမင်းစားသောက်အပြီး အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမှာ TV ကြည့်ရင်း သုံးဖို့ သူ့ကွန်ပြူတာပါ ထုတ်ချလာသည်။ ပြီးနောက် Skype ကို သုံးကာ ဖုံးခေါ်ပါတော့သည်။ မိုက်ကရိုဖုန်းကို တပ်ပြီးခေါ်သဖြင့် ဟိုဖက်မှ အသံများကိုတော့ မကြားရပါ။
"ဟယ်လို ... မောင်မျိူးလား ...."
".............. .................. ..........."
" အကို... မောင်ခြိမ့်ပါ ... အေး ... ဘာအကြောင်းထူးလို့တုံး ငါ့ညီရ ... ညနေက SMS ရတယ်"
" အင်း ... ဟုတ်ပြီ .... ခရက်ဒစ်ကတ် အကောင့် ... "
" ............. ........... ............ ..........."
" အင်း ၃၀ကျော် .... ဟုတ်ပြီ ... iTune စတိုးက ဘီလ် ... "
" ............ ........... ............. .............. ....... ................. ........................ ............ ........ ........... ......... ......
.................................. .................. ............."
" အော် ဟုတ်လား ... ၁၀ခုလောက် ... အင်း ... "
" ............. ............ ............. ....................... ........... ..........."
" ဟေ ... "
ဤနေရာတွင် ဦးခြိမ့်၏ "ဟေ" ဆိုသော အသံမှာ ၀မ်းခေါင်းထဲက လှိမ့်တက်လာသော အသံလုံးကြီးဖြင့် အသံရှည်ဆွဲ အော်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ရာ အနားမှ အသာအကဲခတ်နေသော မဆွိတီပင် လန့်သွားပါသည်။ အပေါ်က ကြားခဲ့ရသလောက် ငွေ၃၀ များ ဒီလောက် " ဟေ " စရာ ပါ သလားပေါ့။
ဒီနေရာတွင် ဦးခြိ်မ့်၏ "ဟေ" အကြောင်း ပြောရဦးမည်။ လွန်ခဲ့သော ၂လ-၃လလောက်ကလည်း ဤသို့ဖုန်းပြောရင်းဖြင့် တစ်ခါ "ဟေ " ဖူးလေရာ ထိုစဉ်ကလည်း အင်မတန် စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းဆိုးတစ်ခုကို ကြားခဲ့ရဖူးသည်။ မိမိတို့ အဖွဲ့ထဲမှ အသိ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် မမျှော်လင့်ပဲ လည်ပင်းတွင် အကျိတ်ကလေးစမ်းမိ၍ သွားစစ်လိုက်ရာ ကင်ဆာကျိတ်ဖြစ်နေကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်းဖြစ်လေသည်။ ထိုစဉ်ကလည်း သူ့ "ဟေ" မှာ အတော်ကျယ်ပြီး အထိတ်တလန့် အော်လိုက်ရာ အိမ်ခန်းထဲမှာ ကွန်ပြူတာသုံးနေသော မဆွိတီပင် လန့်သွားပါသည်။ ကိုယ့်မှာ ခင်မင်ရသော မိတ်ဆွေအတွက် အလွန် ၀မ်းနည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရဖူးသည်။ ထို့ကြောင့် ဦးခြိ်မ့် ဤသို့ " ဟေ" လာလျှင် အလွန်ကြောက်ရပါသည်။
စောနက အကြောင်းပြန်ဆက်ရလျင် ဤသို့ သမီးယောက်ဖ၂ယောက် ၁၀မိနစ်ခန့် အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ပြောကြပြီး ဖုန်းချသွားပါသည်။ ဖုန်းချချခြင်း၊ ဘေးမှာ သတင်းမေးရန် အဆင်သင့်စောင့်နေသော မဆွိတီမှ အလောသုံးဆယ် ...
"အဖေ ဘာတဲ့လဲဟင် ... ခရက်ဒစ်ကတ်က ဘီလ်တွေ အများကြီးလာလို့လား ...ဘာဖြစ်လို့လဲ ..."
" အေး ... iTune ကနေ ညည်းအကောင့်က ခရက်ဒစ်ကတ်ဘီလ်တွေ ၁၀၀၀ကျော်ဖိုးတောင် လာသတဲ့ "
ဒီတစ်ကြိမ် "ဟင်" လိုက်သူက အန်တီဆွိ ကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘာတွေများ iTune စတိုးက မသိလိုက်ပဲ ၀ယ်ခဲ့မိပါလိမ့်။ ဒါမှမဟုတ် Apple မှ အကောင့်မှားကာ တောင်းခြင်းလား။ Hack ခံရခြင်းလား။ ကိုယ်လဲ တကယ်မသုံးရပဲနှင့် အော်ဇီဒေါ်လာ ၁၀၀၀ကျော်ကတော့ ဘယ်နည်းနှင့်မျှ မပေးနိူင်ပါလေ။ သမီးအတွက် ဂိမ်းတွေ ဒေါင်းတော့လဲ အတော်များများ free ရတဲ့ ဟာတွေပဲ ရွေးဒေါင်းခဲ့တာပဲ။ သမီးများ ကိုယ်မသိရပဲ ပိုက်ပိုက်ပေးရတဲ့ ဂိမ်းတွေ သူ့ဟာသူ ဒေါင်းနေခဲ့သလား။ ပိုက်ပိုက်ပေးရတယ်ဆိုဦးတော့ သမီးဒေါင်းတာတွေက ဂိမ်းတစ်ခု တစ်ကျပ်၂ကျပ်လောက်သာရှိရာ ပျမ်းမျှအခု ၄-၅၀၀လောက်ဒေါင်းမှ ငွေတစ်ထောင်ရှိမည်။ ခုသမီးကစားသည့်ဂိမ်းက အလွန်ဆုံးရှိလှ ၁၀ခုလောက်သာ။ ရုတ်တရက် အတွေးမျိုးစုံ ခေါင်းထဲမှာ။
" အမလေး အဖေရယ် ... တို့တွေက free ရတဲ့ဟာတွေပဲ ဒေါင်းလုပ်လုပ်တာများတာ ... တစ်ထောင်ကျော်ကတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိူင်ဘူး ... တစ်ခုခုမှားနေပြီ ... မှားနေပြီ အဖေရေ ..."
" ညည်းကသာ မဖြစ်နိူင်ဘူးပြောနေ ... ဟိုက ခရက်ဒစ်ကတ်ကတောင်ဖြတ်ပြီးသွားပြီ။ ပေးရတော့မှာပဲ ... ဒါမျိုးက မပေးလို့ ဘယ်ရမလဲ ... ပေးရမှာလေ ..."
ဤနေရာမှာ ဦးခြိ်မ့် အကြောင်းပြောရဦးမည်။ ဦးခြိ်မ့်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် အလွန်ကပ်စေးနဲသူ နှမြောတတ်သူဖြစ်ပါသည်။ သို့ပေမဲ့ ယခုကဲ့သို့ ဘဏ်ကိစ္စ၊ ဘီလ်ကိစ္စတွေဆိုလျှင်တော့ အလွန်မှန်ကန်တိကျကာ ပေးစရာရှိသည်များကို မနှောင့်နှေးစေရပဲ အရင် ပေးနှင့်သည်ချည်းသာဖြစ်ပါသည်။ မဆွိတီက ဦးတိကျကြီး၊ ဦးစာအုပ်ကြီးဟု ရွဲ့ကာ ခေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ဈေးဝယ်ရင်း ငွေ ၄-၅-၁၀ကျပ်ကို နှမြောချင်နှမြောနေတတ်သည်။ ထို ၁၀၀၀ဆိုသော ဘီလ်ပေးရမည်ဆိုတော့ မနှမြောသည့်အလား သူကပင် calm down ဖြစ်နေသေးသည်။
"နေပါဦး အဖေရယ် ... ဘီလ်ကိုလဲ ကြည့်ပါရစေဦး .... ဘာတွေက ဒီလောက်တောင်ကျတယ်ဆိုတာ။ သမီးကိုလဲ မေးရဦးမယ် ..."
"အေး ဘီလ်ကတော့ တောင်းထားတယ်။ မနက်ဖြန် မောင်မျိုး စကင်န်ကူးပြီး ပို့လိုက်လိမ့်မယ်"
ထို့နောက် အနားမှာထိုင်ကာ စာလုပ်နေသော သမီးကို မေးရတော့သည်။
" သမီးလေး ... အိုင်ပက်မှာ ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ ဂိမ်းတွေ သမီး ဒေါင်းလုပ်လုပ်သေးလား ..."
"ဂျူဂျူ မနေ့က မေမေ့ကို ပြတယ်လေ၊ ၁ကျပ်တန် နဲ့ ၂ကျပ်တန်၊ အဲ့ ၂ခု အဲဒါပဲ လုပ်တာ ... မေမေက အေး .. အေး လုပ်လိုက် ဆိုလို့ လုပ်တာလေ ... "
"အင်းအင်း ... ဟုတ်ပြီ သမီး အခု ခရက်ဒစ်ကတ်ကနေ iTune စတိုးက ဘီလ် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ကျော်တောင်ကျနေတယ်ပြောတယ် ... သမီး ဘာတွေများ ဆော့မိသေးလဲ ... ဂိမ်းဆော့ရင်းနဲ့ ဘာတွေများ ၀ယ်မိသေးလဲ"
" ဂျူဂျူ Smurf ဂိမ်းနဲ့ Tap pet hotel တော့ ဆော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှ မ၀ယ်မိဘူးထင်တာပဲမေမေ ..." ဟု ဆိုကာ ဂျူဂျူလဲ အဆူခံရမည်စိုးလို့လားမသိ ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်နေပါပြီ။
" သမီး ... မငိုနဲ့နော်။ ဒါငိုစရာ မဟုတ်ဘူး ... မေမေတို့က သမီးကို မေးရုံမေးတာ။ ဒါမှ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာသိရမှာ ... ဖြေရှင်းလို့ရမှာလေ ..."
သားအမိ၂ယောက် စကားပြောနေတုံး ဦးခြိမ့်မှ iTune စတိုးသို့ account Kay-in လုပ်ကာ ခရက်ဒစ်ကတ်နံပါတ်ကို ပြောင်းလိုက်ပါသည်။ သူက ခရက်ဒစ်ကတ်များ hack လုပ်ခံရလား သံသယရှိ၍ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် account history ရှာရာ iTune စတိုးမှာ ရှာမတွေ့ပါ။
သို့နှင့် မဆွိတီ၏ email မှာ ပြန်ရှာကြရာ တွေ့ပါပြီ။ iTune store မှ " Your receipt No xxxxxx" ဆိုကာ ၁၅စောင်ခန့်ရှိသော စာများ။
မဆွိတီ၏ ထို email အကောင့်မှာ သိပ် active မဖြစ်ရာ email မစစ်သည်မှာ ရက်၂၀ကျော်ပြီ ထင်သည်။ ယခင်ကလဲ iTune မှ စာများလာဖူးရာ သင့်အကောင့်မှ သုံးငွေ $0 ဆိုတာတွေသာဖြစ်၍ ဂရုလည်း မစိုက်ခဲ့ပါ။ ဖွင့်လဲ မကြည့်ခဲ့ပါ။ ယခုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ အာလားမား ဘီလ်တစ်ခုကို အနည်းဆုံး ငွေ၆၀ခန့် ရှိသော ဘီလ်များ ၁၀ခု-၁၅ခုလောက်။ ဒါတွေကို အကုန်ပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ကျော်လောက်ဖြစ်နိူင်ပါသည်။
သေချာတာကတော့ သေချာနေပြီ။ သမီးကစားသော Tap Pet Hotel ဟူသော ဂိမ်းမှ Pocket Gems Inc ဆိုသော Artist ကုမဏီနာမည်နှင့် လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျင် ဦးခြိမ့်ပြောသလို ကိုယ့်ဖက်ကတော့ သုံးမိတာ သေချာနေပြီ။ ဘာမှလုပ်၍ မရတော့။ သို့နှင့် ဤငွေ တစ်ထောင်ကျော် ပေးရတော့မည်လား။
အန်တီဆွိကား မကျေနပ်ပါ။ ဤလောက်များသောငွေများ သိသိကြီးနှင့်တော့ သမီးတော့ မသုံးလောက်ပြီ။ သုံးသည်ထားဦး ဒီလောက်ကြီး လက်လွတ်စပယ် ကလစ်ကလေး တစ်ချက်လောက်နှိပ်ရုံနှင့် ငွေ၂၀ကျပ် ကျသော ကစားနည်းမျိုး မည်သူက တီထွင်ထားပါသနည်း။ ဒါ မတရားမှု။ ခေတ်သစ် Cheat လုပ်နည်းတစ်မျိူးဟုပင် သတ်မှတ်ပါသည်။
အင်တာနက်မှာ ဟိုရှာ ဒီရှာလုပ်ရတာကို အလွန်ဝါသနာပါသော အန်တီဆွိ ကတော့ ရှာဖွေမှူများကို စလုပ်ပါတော့သည်။ ပထမဆုံး "Pocket Gems accidentally charge" ဆိုကာ google မှာ စရှာလိုက်ရာ အောက်မှ စိတ်ဝင်စားဖွယ် topic တစ်ခုသွားတွေ့ပါသည်။
မိဘများမှ Pocket Gems သို့ ကွန်ပလိမ့်တက်ထားသော ဖိုရမ် အမေးအဖြေများဖြစ်ပါသည်။ ယခုကေ့စ်နှင့် တိုက်ရိုက်နီးပါးတူသော ကေ့စ်ပေါင်းများစွာ ဖတ်ရပါသည်။
ထို့နောက် ဆက်၍ရှာရာ အောက်ပါ topic များကိုလဲ တွေ့ပါသည်။
(ခလေးတစ်ယောက် ဂ်ိမ်းထဲမှ အတုအယောင်ခွေးကို ကျွေးရန် ငွေ ၆၅၉ဒေါ်လာအထိ သုံးဖြုံးမိခြင်း ဟု အဓိပါယ် ပြန်ရမည်ထင်သည်)
(Apple မှ ခလေးများဆော့သော in-app purchase နှင့် ပတ်သတ်ပြီး တရားရင်ဆိုင်နေရပြီ။)
အထက်ပါစာများကို ဖတ်ကြည့်မှ ဖိုရမ်အချို့တွင် သူ့သမီး ၄နှစ်သမီး ကစားမိလို့၊ ၇နှစ်သမီးက မသိပဲ ၀ယ်မိလို့၊ သူသား ၆နှစ်သားက မတော်တဆ ကလစ်လိုက်လို့ အစရှိသဖြင့် ကွန်ပလိမ့်များစွာတွေ့ရာ အင်း ငါလိုလူစားအများကြီးပါလား၊ ဒီလိုကေ့စ်မျိုးတွေ အများကြီးပါလားဟု သဘောပေါက်ပါသည်။
ထို့နောက် သမီး ပြသနာဖြစ်ခဲ့သော Tap Pet Hotel ဟူသော ဂိမ်းကို သွားကြည့်တော့မှ ပို၍ သဘောပေါက်သွားပါသည်။ သမီးဆော့သော ထိုဂိမ်းမှာ တိရိစ္ဆာန်လေးများကို မွေး၍အစာကျွေးရသော ဂိမ်းဖြစ်ရာ တိရိစ္ဆာန်များ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စေရန် အစာများကို ၀ယ်ကျွေးခြင်း၊ အခန်းအတွက် decoration များကို ၀ယ်ဖြည့်ပေးခြင်း အစရှိသည်တို့အတွက် ငွေများကို အသုံးပြုရရာ ထိုငွေများမှာ တကယ့်ငွေအစစ်လား၊ ဂိမ်းထဲမှာသုံးသောငွေဖြစ်သည်လား ခလေးတွေမှာ မခွဲခြားနိူုင်ပါ။ ထိုသို့ မခွဲခြားနိူင်အောင်လည်း နားလည်မှုလွဲအောင် software ကုမဏီများက trap လိုမျိုး တမင်လုပ်ထားသည်ထင်သည်။ ထိုမှရသည့်ငွေက နဲနဲနောနောမှမဟုတ်သည်ကိုး။ ဒီ့ထက်လွယ်သည့်ငွေရှာနည်း လောကတွင် ရှိသေးသလား။
နောက်တစ်ခုက Apple မှာ password ကို ပထမတစ်ခါသုံးပြီး ၁၅မိနစ်အော်တို သုံးစရာမလိုရာ ခလေးများမှာ password ထပ်မတောင်းတော့၍ ပို၍အထင်မှားကာ တကယ့်ငွေအစစ်နှင့် ဂိမ်းငွေကို မှားကြခြင်းဖြစ်လေသည်။ ထိုသို့ ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ငွေများဖြောကနဲ၊ ဖြောကနဲ ကုန်ကာ၊ ဘီလ်လာတော့ complaint တက်ရမှန်းမသိပဲ ပေးလိုက်ရသော မိဘများ ဘယ်နှစ်ဦးရှိပြီလဲ။ မသိနားမလည်သေးသော ခလေးဘယ်နှစ်ယောက် အဆူခံ၊ အဆဲခံ၊ အရိုက်ခံခဲ့ရပြီလဲ။ ဘုမသိ၊ဘမသိနှင့် ခလေးဘယ်နှစ်ယောက် ဒါဏ်ပေးခံခဲ့ရပြီလဲ။
အပေါ်တွင် ဖတ်ထားသည်များအရ Apple မှ ထိုသို့သော ဘီလ်များ ကွန်ပလိမ့်တက်လာလျှင် အလွန်လျှင်မြန်စွာ ဖြေရှင်းပေးပြီး refund ငွေ ပြန်ပေးသည်ဆိုရာ အနည်းငယ် အားတက်သွားသည်။ သို့ပေမဲ့ ဒီလို ခလေးတွေရဲ့ မသိနားမလည်မှုအပေါ် အခွင့်အရေးယူကာ cheat လုပ်သလို အမှုမျိုးအတွက်ကား လုံးဝမကျေနပ်နိုင်ပါ။
မနက် မောင်မျိုးထံမှ ဘီလ်ရလာတော့ Apple ကို လှမ်းစာရေးပါသည်။ iTunesStoreSupport@apple.com လိပ်စာကို ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကလစ်နှိပ်၍သာ ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
၃နာရီအချိန်လောက်အတွင်း Apple မှ စာပြန်လာသည်။ သူသည် အောက်ပါငွေကို refund ပြန်ပေးမည်ဟု
အကြောင်းပြန်သည်။ ရယ်စရာတစ်ခုမှာ ကွန်ပလိမ့်စာအတွက် သူကပင် appreciate လုပ်ပါကြောင်း၊ ၀မ်းမြောက်ပါကြောင်းပင် ပြောလိုက်သေးသည်။
I understand that your6year old made some substantial purchases on your account that you would like refunded. I know how disheartening it is to pay for something you don't want and I can certainly appreciate your desire to be refunded for this mistaken purchase. My name is xxx and I will be more than happy to rectify the situation for you.
I checked your account and it looks like the purchase "Treats" was purchased from within the application "Tap Pet Hotel" on your iPhone, iPad, or iPod touch. This is called an "In-App Purchase". For information on this type of purchase, check out this article:
I understand that the purchase of "Treats" was unintentional. In five to seven business days,acredit of $912.17, plus any applicable taxes, should be posted to the credit card that appears on the receipt for that purchase.
I understand that in app purchasing seems to be better off blocked all the time, but iTunes cannot block the option for developers to add in app purchasing within their applications. Apple has, however, addeda"blocking" feature to Apple devices that you can set up straight from your end. If you would like to prevent In-App Purchases from being made in the future, you can block them on your iOS device. Follow these steps:
1) Tap Settings on your device's home screen.
It has beenapleasure assisting you. Please don't hesitate to write back if you need further assistance. We want to ensure that your issue gets resolved in its entirety. We appreciate your business, thank you for being an iTunes customer!
နောက်ပြီး အရေးကြီးသော အချက် တစ်ခု ရေးထားသေးသည်၊ နောက်ဤလို ပြသနာမျိုး ထပ်မပေါ်အောင် "In-App Purchase" ကို block လုပ်နည်းဖြစ်ပါသည်။ (အမှန် ဦးခြိ်မ့်က ဟိုနေ့ကတည်းက iTune store မှာ ဖတ်ပြီး block လုပ်ပြီးနေပါပြီ။) iPod Touch/iPad/iPhone သုံးသူ မိဘများ အားလုံး block လုပ်ထားသင့်ပါသည်။*****
ကဲ ဒေါ်လာ၁၀၀၀ကျော် ဘီလ်အတွက် ငွေ၉၀၀ကျော်ပြန်အမ်းမည်ဆိုတော့ အန်တီဆွိတို့ ယခုမှ သက်ပြင်းချရပါသည်။ ပေးမည်တကဲကဲ လုပ်နေသော ဦးမောင်ခြိမ့်ကိုလဲ (အဟမ်း ... အဟမ်း) မျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်ကာ Apple မှ စာကိုပြလိုက်ပါသည်။ အမှန်မှာ ထိုနေ့ကတည်းက ခရက်ဒစ်ကတ်က ပေးစရာရှိသော ဘီလ် ၁၀၀၀ကျော်ကို ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ မဟုတ်ပါက ခရက်ဒစ်ကတ်က နောက်ကျကြေး ထပ်တောင်းနေမှာ စိုး၍ဖြစ်ပါသည်။ အော် လောကကြီးမှာ ငွေကုန်နည်း၊ ငွေချူနည်း trap တွေကလဲ ပေါမှပေါ။ ဘဏ်တွေက trap လိုက်၊ Apple လို ကမ္ဘာကျော်ကုမဏီကြီးတွေက trap လိုက်၊ သူတို့မှ မချမ်းသာ မည်သူတွေ ချမ်းသာမည်နည်း။ ထိုပေးခဲ့သော ငွေအတွက် Apple မှ ခရက်ဒစ်ကတ်ထဲကို ပြန်အမ်းငွေထည့်ပေးမည်ဆိုပါသည်။
(၁) မိဘများမှ အမှား
(က) Apple မှ password ကို ခလေးအား ပေးသိစေခြင်း
ခလေးကို ဒီလောက်တော့ နားလည်မှာပါ။ မသုံးလောက်ပါဘူးဟုဆိုကာ Apple store /iTune store ၏ password ကို ပေးမသိစေသင့်ပါ။ ခလေးများ ငယ်သေးရာ မသိနားမလည်သည်ကို အခွင့်ကောင်းယူကာ လုပ်စားသည့်သူများ ရှိနေသည်ကို သတိပြုပါ။
(ခ) ဂိမ်းများမှ သတိပေးစာတမ်းများ သေချာမဖတ်ခြင်း
ခလေးမှ ထိုဂိမ်းများကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါ သတိပေးစာတမ်းကိုသေချာ ဖတ်ပါစေ။ ကွန်ပလိမ့်တွေများလို့လားမသိ ယခုတော့ ဂိမ်း၏မျက်နှာစာမှာကို ဤဂိမ်းတွင် သုံးသောငွေများသည် တကယ့်ငွေကြေးအစစ်ကို သုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု notice စာရေးထားပါသည်။ အများအားဖြင့် ထို notice ကို ဂရုမပြုပဲ ကျော်သွားသည်သာ များပါသည်။ ခလေးများ ကစားနေသည့်အခါလည်း ဒီတိုင်းလွှတ်မထားပဲ တစ်ခါတစ်ရံ surprise check လိုမျိုး စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ ခလေးများကိုလည်း ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စ နားလည်အောင် ရှင်းပြထားသင့်ပါသည်။
(ဂ) In-App Purchases ကို block မလုပ်ထားခြင်း
အပေါ်တွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ block လုပ်နည်းကို Apple မှ လာသော စာထဲတွင်ဖတ်ပါ။
(ဃ) ဘီလ်ကို မှန်မှန်မစစ်ခြင်း၊ မဖတ်ခြင်း
email မှ ရောက်လာသော ဘီလ်များကို မှန်မှန်စစ်ခြင်းအားဖြင့် ငွေတွေ ဤမျှလောက် ပမာဏများများ deposit ဖြစ်မှ သိခြင်းကို ကာကွယ်နိူင်ပါသည်။ အရင်က ဘီလ်တွေက $0 ဆိုတာတွေချည်းလာတာပဲဆိုကာ မဖတ်ပဲ ဖျက်ပစ်ခြင်းများမလုပ်ပါနှင့်။ ဤ case တွင် ပထမ ဘီလ် $ 59.99 ဆိုတာ စလာကတည်းက လိုအပ်သည်များကို လုပ်ခဲ့ပါက နောက်က ဘီလ်တွေ ထပ်လာစရာ မရှိပါ။
( ကိုယ့်ဖက်က အားနည်းချက်များလဲ ရှိသည်ကို ၀န်ခံပါသည်။ )
(၂) Software ရေးသော Artist ကုမဏီများမှ လူလည်ကျခြင်း
အန်တီဆွိကတော့ ဤကုမဏီများ တမင်လုပ်စားသည်၊ ဥပဒေကို လက်တလုံးခြားလုပ်ကာ မတော်တဆ မှားမိသော အမှားအတွက်၊ မသိနားမလည်သေးသော ခလေးသူငယ်များထံမှ ငွေကို လိမ်ယူသည်ဟုပင်ပြောချင်ပါသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ရေးကတည်းက ထိုအမှားမျိုး မမှားအောင်ကာကွယ်နည်းတွေရှိပါလျက်နှင့် တမင် trap လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို ကလစ်လုပ်နိူင်သော ငွေပမာဏမှာ $0.99 မှ $99 အထိပင်ရှိရာ တစ်နေ့တည်း ၉၉ကျပ် အခါများစွာနှိပ်မိသော ခလေးအတွက် စဉ်းစားကြည့်ပါလေ။ သူတို့အနေနှင့် ကွန်ပလိမ့်လာလျှင်လည်း ကျေနပ်အောင် ပြန်လျော်လိုက်မည်။ မလာပါကလည်း ထို ဘီလ်ကို ယူလိုက်မည်။ အချောင်ရ နည်းလားနော့။
အန်တီဆွိတို့လို အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်ရမှန်းမသိ၊ နားမလည်ပါးမလည်နှင့် ကိုယ်သုံးမိတာ ပေးရမှာပဲဆိုကာ ပေးသူမိဘများ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါလေ။ မဆွိတီတို့လို သာမန်လူတန်းစားပင် ဤသို့ဘီလ် ၁၀၀၀ကျော်ပေးရမည့်အမှားမျိုး ဖြစ်တတ်လေရာ၊ ငွေကြေးအလွန်ချမ်းသာသော မိဘများ၏သားသမီးများ ထံမှ ငွေဘယ်လောက်ယူပြီးပြီလဲ တွေးကြည့်ပါလေ။
ခုဆို ဘီလ် ၁၀၀၀ကျော်ကျတာ ပြန်ပေးငွေက ၉၀၀ကျော်ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ ငွေ၁၀၀ကျော် ကတော့ ပေးရမည်။ အမှန်မှာ မဆွိတီတို့ မိသားစုအနေဖြင့် ထို iPad နှင့်ပတ်သတ်၍ free game များစွာရှိရာ ငွေ ဘီလ် ၁၀၀ကျော်ကိုလဲ မမျှော်လင့်ထားပါ။ အစကတည်းက ဘီလ် ၁၀၀ ဆိုပါကလဲ ကွန်ပလိမ့်တက်မည်သာ။ သို့ပေမဲ့ ယခုအဖြစ်က ငွေ ၁၀၀၀ကျော်မှာ ၉၀၀ ကျော်ပင် လျော့သွားရာ ထိုသည်ကိ်ုပင် အလွန်ဝမ်းသာနေရပြီ။ ကျန်သည့်ငွေ၁၀၀ကတော့ သိပ်အရေးမစိုက်တော့၊ စစ်လဲ စစ်ကြည့်မနေတော့ပါ။ ပေးလိုက်တော့မည်ဟု ။ ဤသည်ကကော ကပ်စတန်မာကို လှည့်ပတ်ကာ ငွေကိုယူသည့်နည်းပေပဲလားဟု သံသယဖြစ်မိပါသည်။ (အန်တီဆွိ အဆိုးမြင်တာတွေ များနေပြီလားမသိပါ။)
(၃) Apple မှ လုပ်စားသည်ဟု သံသယ
ယခုကဲ့သို့ Apple မှ ကွန်ပလိမ့်စာ ရရချင်း ကပ်စတန်မာကို ကျေနပ်အောင်ပြောဆိုကာ အလွယ်တကူ ငွေပြန်အမ်းသည်ကိုက မသင်္ကာစရာ အချက်ဖြစ်နေပါသည်။ Bill မှာ လာကတည်းက တောင်းသူသည် Pocket Gems ကုမဏီမှ ဖြစ်ပါသည်။ Apple မှ မဟုတ်ပါ။ သို့ပေမဲ့ ဖတ်ထားသည်များအရ Apple မှလည်း ထိုငွေကို % အချိုး တစ်ခုခု ရသည်ဆိုပါသည်။ Consumer များမှ ပေးသည့်ငွေများသည် ပထမ Apple ကို အရင်သွားသည်။ နောက်မှ Apple က % ဖြတ်ယူကာ Artist ကုမဏီများထံ ပို့ပေးသည်ဆိုပါသည်။ ကမ္ဘာတွင် Apple သုံးသူ မီလျံနှင့် ချီရှိရာ ထိုအခါ သူကလဲ စားနေကျ ကြောင်ဖားကြီးဆိုသလိုပင် ဖြစ်နေတော့ ထိုကိစ္စ ကာကွယ်၍ မရဟုပင်ပြောပေတော့မည်.။ Apple က ပြောသည်မှာ သူ့အနေနှင့် သူ၏ Artist ကုမဏီ (သို့) vendor များ၏ ထိုကဲ့သို့ (ခလေးများကို trap လုပ်ကာ) ငွေရှာနေသည်ကို သိသော်လည်း ဥပဒေကြောင်းအရ တားမြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိဟု အကြောင်းပြပါသည်။
လေ့လာချက်များအရ အောက်ပါဂိမ်းများမှာ ပြသနာအပေးဆုံး ဂိမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ခလေးများ အကစားများသော ဂိမ်းများလဲ ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်ဆိုရသော် ယခုခေတ်ကြီးတွင် ဥပဒေတွေက လက်တလုံးခြားတွေ ရေးထားရာ ထိုအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူကာ ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲကုမဏီများမှ လုပ်စားနေသူများရှိရာ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် အထူးပင် သတိချပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က မဆွိတီတို့ ဖလင်မင်တန်ဈေး (ဆစ်ဒနီမှ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖောက်သယ်ဈေး) သွားတော့ တစ်နေရာတွင် "one dollar" "one dollar " ဟုအော်ကာ အာလူးထုပ်တွေ ရောင်းနေသည်ကိုတွေ့သည်။ အာလူးထုပ်များမှာ တစ်တောင်လောက်ရှိပြီး အနည်းဆုံး ၃-၄ ကီလိုတော့ရှိရာ မယုံနိူင်လောက်အောင် ဈေးပေါလှပါသည်။ ဒါတွေဒီလိုရောင်းနေတာ ဒီလို လူသားလုပ်အားခ ဈေးကြီးသည့် အရပ်မှာ အာလူးစိုက်ခ၊ နှုတ်ခ၊ သယ်ပို့စံရိတ်တောင် ကျေပါ့မလားဟု သူတို့အစား တွေးမိကာ ရောင်းသူတွေကို အားနာနေမိသည်၊ သနားနေမိသည်။ ဒီလောက်ပေါတာတောင် ၀ယ်သူကလဲ ခြောက်တိ၊ ခြောက်ချက်သာရှိသည်။
နောက်တစ်နေရာရောက်တော့လဲ ဈေးထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်ကာ မှိုင်နေသည့် သခွါးသီးရောင်းနေသူတစ်ဦး။ သခွါးသီးတွေကို ဆိုင်ပေါ်မှာလဲ ခင်းထားသည်။ ပုံးတွေထဲမှာလဲ တစ်ချို့တစ်ဝက်။ သူများတွေ တစ်ကေဂျီ ၂ကျပ်-၃ကျပ်ရောင်းနေရာ သူကတော့ တစ်ကေဂျီ တစ်ကျပ်တဲ့။ ဈေးပေါသည်ဆိုကာ သူ့သခွါးသီးတွေကို ကြည့်လိုက်တော့ အပွေးတွေ တက်နေသည်။ အဖြူရောင် အပွေးတွေမှာ ထင်ရှားရကား မည်သူမှ သူ့သခွါးသီး ၀ယ်မည့်သူမရှိ။ သူကလဲ လက်လျှော့သည်လားမသိ။ ဈေးခေါ်ခြင်း၊ အော်ခြင်းအလျင်းမရှိ။ သခွါးသီးပုံကြည့်ကာ မှိုင်နေလေတော့သည်။
ဤတစ်ဆိုင်လုံးပင်ရောင်းရစေဦးတော့ ငွေ ၁၀၀ဖိုးလောက်ပင်မရှိသည့်ငွေအတွက် သူ့မှာ ပူပင်နေရသည်။ သူသည် ဖောက်သည်ဖြစ်သည်ထားဦး၊ ဒါတွေကို အပင်ပန်းခံ စိုက်ပျိုးသည့် လယ်သမား၊ ယာသမားတွေ ဘယ်လောက်သာ အမြတ်အစွန်း ရကြမည်လဲ။ နေရာတကာ ဈေးတွေကြီးသည့် ဆစ်ဒနီလို နေရာမျိုးတွင် ဒါတွေမရောင်းရလျှင် အမြတ်မပြောနှင့် အရင်းပင်မရပါက ဘ၀တွေ ဘယ်လိုရပ်တည်မည်လဲ။ မဆွိတီကတော့ ဖလင်မင်တန်ဈေးသွားကာ ဈေးသည်တွေ၊ စိုက်ပျိုးသူ ယာသမားတွေကို သနားကာ ပြန်လာရသည်။ (မြန်မာပြည်တွင်တော့ မပြောနှင့်၊ ဤအဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးလွန်း၍ ရိုးနေပြီဟုပင် ပြော၍ရသည်။)
ထိုသူများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော် ဆော့ဝဲလ် ကုမဏီများမှ ငွေရလွယ်လမ်း၊ အချောင်လိုက်ကာ ကလစ်ကလေးတစ်ချက် နှိပ်လိ်ုက်ရုံဖြင့် သူ့ ဘဏ့်အကောင့်ထဲ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ငွေ ၉၀-၁၀၀ဖိုး တဖြောဖြော ရောက်အောင် cheat လုပ်ကာ ငွေရှာသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကာ တရားလည်းကျပါသည်။ လောကကြီးမှာ လူချင်းတူသော်လည်း ငွေရှာပုံ၊ရှာနည်း အလွန်ပင် ကွာကြရာ ယနေ့ခေတ်၏ နည်းပညာ တိုးတက်မှုများ၊ ကောင်းလွန်းလှပါသည်ဆိုသော ခေတ်စံနစ်များသည် လူသားတို့ကောင်းကျိုးအတွက် တကယ်ပင် စွမ်းဆောင်သည်လား၊ လူသားအားလုံးအတွက် တရားမျှတမှု အမှန်တကယ်ပင်ရှိပါရဲ့လား သံသယ ဖြစ်မိပါတော့သည်။ ။
Posted by T T Sweet at 1:04 PM 43 comments:
Labels: သတင်းအစုံအလင်မှာ ...
ဦးထုပ်ကတော့ ၀ယ်... ဦး... မှာ ....
ဟိုတစ်လောဆီက Spring ရောက်ပြီဆိုသောအခါ ရာသီဥတုမှာ သိသာလှသည်။ နေ့ခင်းဖက်တွင် အနည်းငယ်ပူနွေးလာပြီး နေကိုတစ်နေကုန်မြင်နေရရာ စလုံးမှလာသူက ကျိတ်ကာ ပျော်လေသည်။ အိမ်မှ ဦးခြိ်မ့်၏ နာမည်ကျော် quilt စောင်ကြီးကို ခေါက်သိမ်းကာ အနည်းငယ်ပါးသော သိုးမွှေးစောင်တစ်ထည် ထုတ်ထားလိုက်သည်။ အနွေးထည်အထူတစ်ချို့လဲ ကြွပ်ကြွပ်အိပ်များနှင့်ထုတ်ခါ ဘီရိုအပေါ်ထပ် တင်ထားလိုက်သည်။ သိမ်းဆည်းပြီး ဖုတ်ဖက်ခါကာ ထမည်ကြံကာရှိသေး၊ တကတည်း မိုးက ရွာလိုက်သည်မှာ ၂ပတ်ဆက်တိုက်၊ ဆောင်းတွင်းထက်ပင် အေးနေသေးတော့သည်။ ဒီတော့မှ သိမ်းထားသည့်စောင်တွေ၊ အနွေးထည်တွေ ကမန်းကတန်းပြန်ထုတ်ရသည်။ "ဟမလေးဟဲ့ ဘုရားစူး Spring ..." ဆိုကာ ဦးခြိမ့်နှင့်ပင် အပြန်အလှန် မျက်မှောင်ကြုတ်ခဲ့ရသော ဇာတ်လမ်းများပင် ဖြစ်ပွားခဲ့လေသည်။ ဒီအပတ်တော့ မိုးလဲသိပ်မရွာတော့။ နေပြန်ပူပြီဖြစ်ရာ နေ့အပူချိန်မှာ ၂၀ ၀န်းကျင်ခန့်၊ အတော်ပင် နေလို့ ကောင်းလာပါပြီ။
အရှင်နေမင်းကို မျှော်နေရသောနေ့များမှ အကျွန်ုပ် ကင်းလွတ်ပြီထင်သည်။ (အ၀တ်တွေ မခြောက်မှာ စိုးသောကြောင့် )း)
နေပူသောတစ်ရက် သမီးကျောင်းသွားအကြို သမီးသူငယ်ချင်း၏အမေ စလုံးသူ ကင်န်ဂျိုးသည် ဦးထုပ်လှလှဆောင်းကာ ရှိုးစမိုးနှင့်ဖြစ်နေသည်။ အော်ဇီမှာ ရာသီဥတုသာအေးသည်။ နေပူပြီဆိုလျင်ဖြင့် နေအပူရှိန်က အလွန်ပင်ပြင်းလေသည်။ နိူင်ငံကကျယ်သည့်အပြင် စလုံးအစိုးရလို ပြည်သူလူထုအား အလိုလိုက်ကာ အမိုးအကာများလည်း မရှိရကား တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ လမ်းလျှောက်လျှင် နေအပူဒါဏ်ကို မခံနိူင်။ ပိုဆိုးသည်မှာ အန်တီဆွိငယ်စဉ်က နေပူထဲ နှင်းဆီပန်းတွေခူးရာက မျက်နှာတွင် မှည့်ခြောက်များ ဘလပွဖြစ်နေရာ နေပူခံလို့ကတော့ မျက်နှာတစ်ခုလုံး မည်းမည်းတုတ်လုမတတ် ဖြစ်တော့သည်။ ဤသည်ကို ကာကွယ်ရန် စလုံးမှ ပါလာသော ရှိစုမဲ့စု ထီးစုတ်လေးသာ ထုတ်ဆောင်းရလေသည်။ ထီးကလဲ စလုံးမှ လေဒါဏ်၊ ရေဒါဏ်၊ နေဒါဏ်များ နှစ်ရှည်ခံခဲ့ရသော ထီးဖြစ်လေရာ ထီးရွက်များမှာ လေတိုက်တိုင်း တဘတ်တဘတ်နှင့် ဘတ်လဘိုင်လိုက်နေသည်။ ထို့အပြင် နေပူထဲ ထီးဆောင်းသူ အလွန်ရှားရာ ထီးစုတ်ကြီးနှင့် အန်တီဆွိမှာ အလွန်ရှိုးပဲ့သည်ဟု ထင်နေသည်။ ထိုနေ့က အနှီစလုံးအမျိုးသမီး ဦးထုပ်ဆောင်းလာတာ တွေ့တော့မှ အကြံရသွားသည်။ အင်း ... ဦးထုပ်တစ်လုံးတော့ ၀ယ်..ဦး...မှ...ပါလေ။
ထိုနေ့မှစ၍ အန်တီဆွိသည်ကား ဆိုင်တွေရောက်တိုင်း ဦးထုပ်များကို ကြည့်လေသည်။ Spring ရောက်ပြီဆိုကတည်းက ရှော့ပင်စင်တာတွေမှာလည်း ဦးထုပ်အမျိုးမျိုး တင်ထားရာ ဒီဇိုင်းကလဲ မျိုးစုံ၊ ဦးထုပ်များ အလွန်ပေါပါသည်။ ငယ်ငယ်က မဂ္ဂဇင်းတွေထဲတွင်သာ မြင်ဖူးသည့် အဟမ်း အဟမ်း လေဒီဒိုင်ယာနာတို့၊ မာဂရက်သက်ချာတို့ ဆောင်းသည့် ဦးထုပ်မျိုး ခပ်လှလှတွေလဲ ရှိသည်။ ဟိုတစ်လောဆီက မင်းသားဝီလျံ မင်္ဂလာပွဲတွင် အင်ဒရူးမင်းသားရဲ့သမီးတွေ ဆောင်းသော ဦးထုပ်လို ရှယ်အဆန်းတွေပင် ရှိလေသည်။
၀ီလျံတို့ မင်္ဂလာပွဲမှာ အင်ဒရူးနဲ့ ဆာရာတို့ရဲ့ သမီး Princess Beatrice အဲ့ ဦးထုပ်ကြီးဆောင်းထွက်လာတော့ ရယ်လိုက်ရတာ အူတောင်နာသည်။ (နောက်တော့ အဲ့ဦးထုပ်က ပြောင်စရာကြီးကို ဖြစ်လို့။ အဲဒီအချိန်လောက်က အိုဘားမားတို့ ဘင်လာဒင်ကို ၀င်တိုက်တဲ့ အချိန်လောက်ဖြစ်နေတော့ အခန်းထဲမှာ ကွန်ပြူတာတွေနဲ့ စစ်ဆင်ရေးလုပ်နေတဲ့ အချိ်န်၊ တကယ့် စီးရီးယက်စ်အချိန်ကြီးမှာ အဲ့ဦးထုပ်ကြီးတွေကိုယ်စီဆောင်းပြီး ဖိုတိုရှော့သမားတွေက ပြောင်ထားတာ။ ရယ်လိုက်ရတာ။)
မင်းသမီးတွေ အကြောင်းပြောတာနဲ့ ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိ။
အဲ ... အဲဒီမှာ မြက်ဦးထုပ်၊ ဂျုံရိုးဦးထုပ်၊ ပလပ်စတစ်ကို မြက်လို ရက်ထားသော ဦးထုပ်မျိုးစုံ၊ အရောင်စုံရှိပါသည်။ ဒါပေသိ ဦးထုပ်လေးတွေ သူ့ဟာသူနေတာ လှပါသည်။ ကိုယ်ဆောင်းလိုက်သောအခါ မည်သို့မှ မလိုက်ဖက်။ လှလဲမလှတော့ပါ။ ဦးထုပ်ကပဲ ကားနေသလို၊ ခေါင်းကပဲ ချောင်ကာ ဦးထုပ်ကပဲ အောက်ကျနေသလို၊ ခေါင်းကြီးပဲ ပုဝပ်ဝပ်ဖြစ်သွားသလိုလို၊ ဘယ်လို ဘယ်လိုမှ ကြည့်မကောင်းပါပေ။ တစ်ခါ ဦးထုပ်လေး တစ်ခု အဆင်ပြေပြန်တော့ ဈေးက ၄၀ ကျပ်တဲ့။ ဦးထုပ်တစ်လုံး အတွက် အော်ဇီ ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး ၄၀ တော့လဲ မတတ်နိူင်ပါ။ ဈေးမြင်တာနှင့် ချကာ ပြေးလေသည်။ စိတ်ကြိုက်လေးတွေ့တုံး အားပေးမလားလို့ ဦးခြိမ့်ဖက်လှည့်ကာ " ဦးထုပ်လေး လှတော့လှတယ် ၄၀ တဲ့ တော့" ဆိုတော့ မကြားသည်လား၊ မကြားချင်ယောင်ဆောင်သည်လားမသိ။ ဘာမျှတုန့်ပြန်သံမကြားရပြီ။ သို့နှင့်ထိုနေ့က ဦးထုပ်မ၀ယ်ဖြစ်ခဲ့ပါ။
သားအမိ၂ယောက် Myer မှာ ဦးထုပ်တွေ try ရင်း အပျော် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားကြသည်။ ဦးခြိမ့်က သူ့တယ်လီဖုန်းလေးဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
"ဒါလေးဆောင်းလိုက်တော့ များက လေဒီဒိုင်ယာနာနဲ့ မတူဘူးလားဟင်" ဟုနောက်သလိုလိုနှင့်ပြောတော့ ဦးခြိမ့်က လေဒီဒိုင်ယာနာနှင့်တော့မတူ "အဲလစ်ဇဘက် ဘုရင်မကြီး"နဲ့ တူသည်ဆိုလေသည်။ ဂျူဂျူက တခစ်ခစ်ရယ်လေသည်။
အဟမ်း အဟမ်း။ ဒါကလဲ ဆိုင်က ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဂိုက်ပေးကြမ်းနေတာ။ တုတ်ကောက်လေးပါရင် ပိုတူမယ်။ ဟီးဟီးး)
တစ်နေ့ကတော့ ဘီရိုတွေ ရှင်းရင်းနှင့် ဦးထုပ်အဟောင်းလေး တစ်လုံး ထွက်လာရာ ၀မ်းသာသွားသည်။ ဟိုးစင်္ကာပူမှာတုံးက Orchid garden မှာ ဂျူဂျူ မရမက ပူစာ၍ ၀ယ်ပေးလိုက်ရသောဦးထုပ်ဖြစ်သည်။ ယခုတော့သူက အဲဒီဦးထုပ်က တောကျသည်၊ ပုံတုံးသည်ထင်ပုံရသည်၊ မဆောင်းတော့။ ဦးထုပ်အငမ်းမရ လိုချင်နေသော အန်တီဆွိမှာ သမီးအကျ အမေရတာပေါ့ဆို ဆောင်းကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်နှင့် အနေတော်ဖြစ်နေသည်။
မနက်ကျောင်းလိုက်ပို့တော့ နေကအတော်ပူရာ ထိုဦးထုပ်လေး ဆောင်းသွားလိုက်သည်။ မျက်နှာကို နေပူအတော်သက်သာရာ ရလဲ့ တယ်ဟုတ်ပါလား ဆိုကာ အလွန်ပင် သဘောကျနေသည်။ ဦးထုပ်လေးဆောင်းကာဖြင့် လမ်းလျှောက်လာရာ ရှေ့မှာလဲ ဦးထုပ်လှလှနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ခလေးလက်ဆွဲကာ သွားနေတာ မြင်ရသည်။ မျက်လုံးက ဦးထုပ်ဆီသာရောက်သွားသည်။ အပြာနုရောင်လေးမှာ ပန်းပွင့်လေးတစ်ပွင့်နှင့် အတော်လှသည်။ သူတို့က နှေးနေတာနှင့် ကျော်တက်တော့ ကြည့်လိုက်ရာ ဦးထုပ်ပိုင်ရှင်မှာ အသက်၆၀ကျော် အဖွားကြီးဖြစ်နေလေသတည်း။ မြေးဖြစ်သူကျောင်းလာပို့တာဖြစ်မည်။ သူ့ကိုကြည့်ကာ ကိုယ့်မှာတော့ ဦးထုပ်အစုတ်ကလေး နှင့် သိမ်ငယ်လှသည် ထင်နေသည်။
အပြန်ကျ မျက်နှာချင်းဆိုင်က အမျိူးသမီးတစ်ယောက် အညိုရောင် မြက်ဦးထုပ် လှလှ၊ ခပ်ကားကားလေးဆောင်းကာ ရှိုးစမိုးနှင့် ခလေးကျောင်းလာပို့သည်။ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း အဖြူရောင်လေး။ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း နက်ပြာရောင် မြက်ဦးထုပ်လိုမျိုး ခပ်လှလှ။ မနက်နေပူပူတွင် ကျောင်းလာပို့သော အနှီအမျိုးသမီးကြီးငယ်တို့သည် ဦးထုပ်ရောင်စုံဆောင်းကာဖြင့် ဦးထုပ်ဖက်ရှင် အလှပြိုင်နေကြလေပြီတကား။
ဘေးမှ သမီးအကျ ဦးထုပ်ကြီးဆောင်းကာ ငိုက်စိုက်ငိုက်စိုက်နှင့် လမ်းလျှောက်နေသော အန်တီကြီးမှာလည်း မိန်းမတို့ သဘာဝ အားကျမခံ တွေးနေလေသည်။
ဟင်း ... မဖြစ်ချေဘူး ... ငါလဲ ဦးထုပ်လှလှတစ်လုံးတော့ အမြန်ဝယ်ဦးမှပါလေ .. ...။
Posted by T T Sweet at 4:30 PM 26 comments:
မြက်လှည့်၊ မျက်လှည့် weed၊ Shuffle
အရင်ကတော့ သမီးကျောင်းလိုက်ပို့ရင် အုတ်ခင်းထားတဲ့ လမ်းလေးကပဲသွားနေကျ။ ဒီနေ့တော့ ပီယာနိူသင်တန်းရှိတာနဲ့ ဖြတ်လမ်း မြက်ခင်းကျယ်ကြီးကို ထောင့်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးသွားရတယ်။ နောက်မှို့ဆို သမီးကျောင်းရှိတဲ့ တောင်ကုန်းလေးကိုတက် ပြီးမှ ပီယာနိူသင်တဲ့အိမ်ရှိရာ တောင်အောက်ကို ပြန်ဆင်းသလိုဖြစ်နေတာကိုး။ မြက်ခင်းကဖြတ်တော့ ခရီးကတစ်ဝက်လောက် သက်သာတဲ့အပြင် အပေါ်လဲမတက်ရတော့ဘူးပေါ့။
အဲဒီမြက်ခင်းက သမီးတို့ ကျောင်းဘေး အထက်တန်းကျောင်းက ဘောလုံးကွင်းပဲ။ မြက်ခင်းဖြတ်ရင်းနဲ့ ဘေးနားက မရိပ်ပဲ ရှည်နေတဲ့မြက်တွေက မြက်ပန်းလေးအချို့ ကဗျာဆန်လွန်းလို့ ခူးလာခဲ့သေးတယ်။ မြက်တွေကလဲ မျိုးစုံရှိတော့ မြက်ပန်းတွေကလည်း မျိုးစုံ။ အဲ့ဒီမြက်ပန်းလေးတော့တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူးရယ်။ မြက်ကိုင်းလေးကို ကိုင်ထားရင် မြက်ပန်းလေးတွေက တွဲလောင်းလေး လှုတ်လီလှုတ်လဲ့နဲ့ ကြည့်လိုတောင့်ကောင်းသေးတယ်။ သမီးကတော့ မေမေ့ဟာက Cocoon တွေနဲ့ တူတယ်လို့ ပြောနေတယ်။
အပြန် မြက်တောထဲ တစ်ယောက်ထဲ ဖြတ်မိတော့ စိတ်ကဟိုရောက်၊ ဒီရောက်၊ ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့ ငယ်ငယ်က ဒီလိုမြက်တောမျိုးဖြတ်သွားဖူးတာ သတိရတယ်။ မဆွိတီတို့ငယ်ငယ်က နေတဲ့ကျောင်းက အင်းစိန်ပြည်လမ်းဘေးက နာမည်ကျော် ကိုးလောင်းကွေ့ မရောက်ခင် မထင်မရှား အလယ်တန်းကျောင်းလေးပေါ့။ လေယာဉ်ကွင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိပြီး ပြည်လမ်းရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းကတော့ သံဆူးကြိုးတွေ ကာထားတဲ့ လေယာဉ်ကွင်းပဲ။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ အိမ်ကနေကျောင်းကိုသွားရင် ကျောင်းကားနဲ့သွားရတာ။ ညနေကျောင်းဆင်းချိန်ဆို ကျောင်းအ၀၊ လမ်းမနားကမြက်တွေနဲ့ တောင်ကုန်းလေးကနေ စောင့်ရတယ်။ ကျောင်းကားစောင့်နေတုံးလဲ တောင်ကုန်းပေါ်ကနေ လှိမ့်ချ၊ လှဲချကြပေါ့။ အင်္ကျီတွေ၊ စကတ်တွေမှာလဲ မျက်သီးအချွန်တွေ၊ ကပ်စေးနဲသီးတွေကပ်လို့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ခွါရတာက အလုပ်တစ်ခုပဲ။
တစ်ခါတစ်ရံ ကျောင်းမှာ အချိန်ပိုသင်တဲ့ စနေ၊တနင်္ဂနွေလိုနေ့မျိုးဆို ကျောင်းကားကမရှိဘူး။ ကိုယ်တွေနေတဲ့ ၀န်ထမ်းတန်းလျားနဲ့ ၁၀မိုင်ကုန်း-နံပတ် ၉ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကတင် တစ်မိုင်လောက်လမ်းလျှောက်ရတာဆိုတော့ မဆွိတီတို့တွေ ဖြတ်လမ်းကပဲ သွားကြတယ်။ အဲဒီဖြတ်လမ်းကတော့ လေယာဉ်ကွင်း သံဆူးကြိုးကို ကျော်ဝင်ပြီး လေယာဉ်ကွင်းထဲက မြင်ပင်တွေ ခြုံပင်တွေ ကြားထဲက ဖြတ်သွားရတာပဲ။
အဲဒီဖြတ်လမ်းကို အကြီးတန်း အကိုကြီးတစ်ယောက်နေ ပြခဲ့တာ။ သူငယ်ချင်းတွေ ၁၀ယောက်တစ်ဖွဲ့လောက်ရှိမယ် သွားကြတာ ပျော်စရာကြီး။ သွားရင်းနဲ့တောထဲ အလေ့ကျပေါက်နေတဲ့ ပန်းတွေ၊ အရွက်တွေ၊ အပင်တွေလဲ ခူးကြသေးတယ်။ ကြိမ်သီးဆိုတာ စားဖူးကြလားတော့မသိဘူး။ ထန်းပင်လို ခပ်ဆင်ဆင် အပင်က အသီးသေးသေးလေးတွေ၊ အစေ့က ထန်းသီးလိုပဲ ဆတ်တောက်တောက်နဲ့ ၀ါးလို့သိပ်ကောင်း။ အခွံကတော့ ဖန်ချက်၊ နောက် ခြင်းကြားသီးခေါ်တဲ့ ခပ်ချဉ်ချဉ်အသီးလေးတွေလဲ ခူးစားကြတယ်။ ပါးစပ်တွေ ခရမ်းရောင်ဖြစ်စေတဲ့ အိုးပုတ်သီးအမှည့်တွေလဲ စားတာပဲ။
အဲဒီမှာ သွားရင်းနဲ့ တစ်ယောက်က မျက်လှည့်ပြမယ်နော်ဆို မြက်ပင်လေးတစ်ပင်ကို ခူးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တံတွေးလေးဆွတ်ပြီး လက်မနဲ့ လက်ညှိုးလေးနဲ့ ဖွကိုင်ထားတာ မြက်ကလေးက လက်ထဲမှာတင် လည်နေတယ်။ အမှန်က မြက်ပန်းလေးဗျ။ ပန်လေးကကလဲ လိမ်ပြီးကောက်နေတာ။ သိခါစကတော့ အတော်ထူုးဆန်းတယ်ပေါ့။ မြက်က သူ့အလိုလို လည်နေတာ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်တော့လဲ လည်တာပဲ ။ ငယ်ငယ်က အဲဒီမြက်ကလေးတွေ ခူးပြီး အိမ်ရောက်တော့ မျက်လှည့်ပြရတာ အမောပဲ။
အဲ့လိုမြက်မျိုးလေးခပ်ဆင်ဆင်ပဲ။ ဟိုကတော့ လိမ်နေတာ။
နောက်ကြီးလာမှ သိလာရတာ။ အဲဒီမြက်ကလေးတွေက ပန်းပွင့်တော့ သဘာဝအလျှောက် လိမ်ပြီး ပွင့်ကြတာ။ သူ့ပန်းလေးတွေက စပါးတို့ဘာတို့လို ခပ်ရှည်ရှည်လေးတွေအပြင် ကောက်နေသေးတယ်။ အဲလိုတစ်ချိန်လုံး လိမ်ထားရာကနေ ခူးပြီး တံတွေးဆွတ်လိုက်တော့ အလိမ်တွေက သူ့အလိုအလျှောက် တဖြေးဖြေးပြေပြီး မြက်ကလေးက လည်နေတာ။ မသိရင်တော့ အတော်ဆန်းတာပေါ့။ အမှန်က အဲဒါ မျက်လှည့် မဟုတ်ဘူးဗျ။ မြက်လှည့်။ မြက်က သူ့အလိုလို လည်နေတဲ့ မြက်လှည့်ပေါ့။ နောက်ပိုင်းတော့ အဲလိုမြက်တွေ အလွယ်တကူမရှိတဲ့ အိမ်နားမှာ မျက်လှည့်ပြချင်တော့ လူလည်ကျကြသေးတယ်။ မလည်တဲ့ မြက်တွေကိုခူး၊ လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကြားညှပ်၊ လက်ကမသိမသာလှည့်ပြီး မြက်ကိုလည်အောင်လုပ် မျက်လှည့်ပြကြသေးတာ။ အဲဒါကျ တကယ့်မျက်လှည့်ဗျ။
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ မြက်ခင်းထဲ ဖြတ်ရင်းနဲ့ ငယ်ငယ်က အကြောင်းလေးတွေ သတိရသွားလို့ပါဂျာ။
မဆွိတီတို့ရောက်ကာစက အိမ်ဘေးမှာ မျက်ခင်းသေးသေးလေးတွေ့တော့ သဘောကျသွားတယ်။ သိပ်လဲ မကျယ်တော့ မြက်တွေလဲ အများကြီး မရိပ်ရဘူးပေါ့။ ဟော ... ပြောနေတုံးရှိသေး ဦးခြိမ့်က မြက်ခင်းထဲမှာ weed တွေရှိတယ်တဲ့။ weed ဆိုတာကတော့ မြက်မဟုတ်ပဲ တခြား အလေ့ကျပင် အရိုင်းပင်တစ်မျိုးပေါ့။ သူပြောတာက weed တွေက မြက်တွေကို ဒုက္ခပေးသတဲ့။ မြေဆီသြဇာကိုလဲ စုတ်ယူသတဲ့။ ကြည့်လိုက်တော့ မြက်ခင်းက တစ်ခုလုံးစိမ်းနေတော့ လှတယ်လို့ထင်နေတာ။ weed တွေပါ ရောပြီးစိမ်းနေတာကိုး၊ ဒါနဲ့သူက weed တွေ သတ်မယ်ဆိုပြီး အပင်သတ်ဆေးတစ်မျိုးဝယ်ပြီး ဖြန်းလိုက်တာ weed တွေတင်မက မြက်တချို့ပါသေကုန်လို့ မြက်ခင်းကလဲ မစိမ်းတော့ဘူး။ weed တွေကလဲ အကုန် ဘယ်သတ်နိူင်မလဲ။ ကျန်နေသေးတော့ ပွားနေသေးတးတာပဲ။ ခုတော့ကွက်တိကွက်ကျားနဲ့ အတော်ရုပ်ဆိုးသွားတယ်။ မသတ်ခင်ကပြောပါတယ်။ အဲလိုစိမ်းစိမ်းလေးလဲ လှပေသားပဲ weed ကို မြက်လို့သဘောထားလိုက်ပေါ့ဆို မရဘူး။ သူကလဲ စိတ်ကြီးချက်။ ပြီးတော့ မြက်ခင်းကွက်တိကွက်ကျားဖြစ်မှ သတ်မိတာ သူ နောင်တရသတဲ့။
အဲဒီမြက်ခင်းကွက်ကြားပေါ်မှာ ဂျူဂျူတို့ Shuffle လုပ်နေတာပါခင်ည။ ဂျူဂျူတို့ ယူကျူ့ထဲကနေကြည့်ပြီး အတတ်တွေ စုံနေတာလေ။မနိူင်ဘူးဗျာ။
သူကတော့ shuffle လို့ပြောတာပဲ။ မျက်စိထဲတော့ ပရွက်ဆိတ်ကိုက်လို့ ခြေထောက်ကို ခါနေသလိုပဲ။
Posted by T T Sweet at 2:25 PM 13 comments:
" သမီးရေ ... ဒီကြက်ဥပြုတ်လေး စားလိုက်နော် ... ရော့ ... ရော့ ... အမေ ခွံ့ကျွေးမယ် ... "
" အဲဒါမကြိုက်ရင် ... ဒီမှာကြက်သားကြော်လေး ... ထမင်းပူပူလေးနဲ့ စားလိုက်ပါလား ... သမီးရယ် ... အမေဇွန်းလေးနဲ ခွံ့ကျွေးမယ်လေ .... စားမလား ... "
" မစားချင်ပါဘူးဆို ... "
" ဒါဆို ... မုန့်ဟင်းခါးပူပူလေး စားမလား ... အမေမနက်ကမှ ဦးကျားတို့ ဆိုင်က သွားဝယ်ထားတာ ... စားလိုက်နော် သမီး ... စာမေးပွဲတွင်းကြီး အားမရှိပဲနေလိမ့်မယ် ... "
" တကယ်မစားချင်လို့ပါဆိုနေမှပဲ ... အမေကလဲဗျာ ... အမေလုပ်တာနဲ့ စာကြည့်လို့ မရတော့ဘူး ... "
အထက်ပါ စကားသံများမှာကား မဆွိတီငယ်ငယ်က စာမေးပွဲဖြေတိုင်း ကြားနေကျ အမေနှင့်သမီးကြား စကားသံများဖြစ်ပါသည်။ မဆွိတီတို့ အမေဖက်မှ အမျိုးများသည် သားသမီးအလွန်အလိုလိုက်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကျောင်းစာ ပညာရေးနှင့် ပတ်သတ်လျှင်။ ကျောင်းမှာအဆင့်ကောင်းကောင်းရဖို့။ ၁၀တန်းမှာ လိုင်းကောင်းကောင်းရဖို့။ စာလုပ်နေရင်ပြီးရော။ ကျန်တာတွေ အကုန်လုပ်ပေးသည်။ တတ်နိူင်သမျှ အလိုလိုက်ကြသည်။ ခလေးများကလည်း ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူကာ မိဘကို မညှာကြ။ မဆွိတီကိုယ်တိုင်ပင် အဆောင်နေမှ တော်တော်သိတတ်လာခြင်းဖြစ်လေသည်။
အမေ့တွင် မွေးချင်းညီမ မရှိ။ ညီမ၀မ်းကွဲများကို အရင်းတွေလို သဘောထားသည်။ ထိုညီမ၀မ်းကွဲတွေမှာလဲ အမေ့ညီမတွေလို့ မပြောရ၊ သားသမီးအလိုလိုက်လွန်းသည်ဟု စိတ်တွင်ထင်နေသည်။ ထင်စရာသာဓကများလည်း ရှိခဲ့သည်ကိုး။
တစ်ခါက မဆွိတီတို့အိမ်သို့ ဆေးကုရန် အမေ့ ၀မ်းကွဲညီမအကြီး၊ ၁၀တန်းအောင်ပြီးစသမီးနှင့်အတူ အိမ်မှာလာတည်းသည်။ ခလေးမလေးကရုပ်ကလေးက ချောချောလေး၊ စာလေးလဲ တော်ပါသည်။ သူတို့အိမ် အရင်က အလည်ရောက်ဖူးသည်မို့ ဒီကလေးမ အလိုလိုက်ခံရမှန်း သိပြီးသားပါ။ သို့ပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ အတော်ဆိုးသည်။ သူများအိမ်တွင် ဧည့်သည်လုပ်သူက မနက် ၁၀နာရီကျော်မှ အိပ်ရာထသည်။ အမေနှလုံးရောဂါသည်က သမီး ဝေယာဝစ္စအကုန် လုပ်ပေးနေရသည်။ သမီးစားဖို့ မုန့်ဟင်းခါးကို လမ်းထိပ်မှာ သွားဝယ်ပေးသည်။ စားပြီးသားပန်းကန်ကို ဆေးပေးသည်။ သင်္ကြန်တွင်းမှို့ ရန်ကုန်သင်္ကြန် လည်ချင်သည်ဆိုကာ အဖော်မရှိ၍ အမေကို အတင်းခေါ် သည်။ အမေရောဂါသည်ကလည်း သမီးစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရော ... သမီးနှင့် သင်္ကြန်လိုက်လည်ပေးလေသည်။ သားအမိ၂ယောက် ရန်ကုန် သင်္ကြန်ကို ဘတ်စ်ကားနှင့် လည်ကြသည်။ အပြန်တွင် ဆေးလာကုသည့်အမေမှာ ရွှဲရွှဲစိုကာ ပြန်လာရသည်။
တစ်ခါကလည်း မဆွိတီ အမေတို့ရွာ အလည်သွားစဉ်ကဖြစ်သည်။ ဒါကတော့ နောက်ဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ရဲ့သမီး၊ ၈တန်းကျောင်းသူ။ မဆွိတီတို့ အမေတို့ရွာမှ သူတို့နေသည့်မြို့သို့ အတူပြန်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ရွာမှ မြို့ကို တစ်မိုင်လောက်လမ်းလျောက်ရသည်။ မဆွိတီကလည်း ကိုယ့်အထုတ်အပိုးနှင့်ကိုယ် မနိူင်မနင်းပါ။ သူကလဲ ကျောပိုးအိပ်နှင့်။ လမ်းကျတော့ သူ့ကျောပိုးအိပ်ကို ကိုယ့်ကို လာပေးသည်။ ကိုယ်ကအကြီးဆိုတော့ မနိူင်မနင်းကြားမှပင် ခဏတော့ သယ်ပေးလိုက်ပါသည်။ သူကတော့လက်လွတ်။ ဒီလိုပဲ မိဘတွေနှင့်သွားရင် သူ့ပစ္စည်းကို မိဘတွေကအကုန်သယ်ပေး သူကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သွားနေကျထင်ပါသည်။ ကိုယ်ကလဲ သူတို့လိုပဲ အိမ်မှာ တစ်ဦးတည်းသောသမီး။ အလိုလိုက်ခံထားရတာပဲ။ သူတိုနှင့်ကျမှ သူတို့ဟာတောင် ကိုယ်ကသယ်ပေးရမှာလား။ သူကဘာမှို့လည်း။ မဆွိတီလည်း အဲဒီအချိန်က အတော်ငယ်သေးတော့ သဘောထားမကြီးနိူင်ခဲ့ပေ။ ငယ်တော့ Mature လဲ မဖြစ်သေးပါ။ သူ့ကိုပြတ်ပြတ်သာပြောလိုက်သည်။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်သယ်။ ကိုယ့်ဝန်ကိုယ်ထမ်း။ ( နောက်ပိုင်း ဒီကိစ္စကို သူ့အမေနှင့်ရော အမျိုးတွေရော တိုင်ပြောသည်ဟု သိရပါသည်။)
မိဘတွေက ချစ်လွန်းလို့ အလိုလိုက်ထားသောကြောင့် ခလေးတွေမှာ မသိတတ်တာတွေ၊ အပိုးမကျိုးတာတွေ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာတွေ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ သာဓကများနှင့် မဆွိတီဟာ ကိုယ့်သားသမီးအလှည့်ရောက်ရင်တော့ဖြင့်. စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဖြစ်ရမယ်။ အမေတို့ အမျိုးတွေလို သားသမီး စုံလုံးကန်း အလိုလိုက်တာမျိုးတွေမဖြစ်စေရဘူး ဆိုကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မောင်းတင်လာခဲ့ပါသည်။ စလုံးရောက်လာတော့ ပိုဆိုးပါသည်။ တရုတ်လူမျိုးများသည် သားသမီး မီးသေသည်ဟုထင်သည်။ သူတို့မှာ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဘတ်စကားပေါ်၊ MRT ပေါ်၊ ရှော့ပင်းစင်တာတို့တွင် ခလေးများမှာ မိဘပြောစကားနားထောင်ကာ အပိုးကျိုးကြသည်ဟုမြင်ပါသည်။ အလိုလိုက်တတ်သည့် မြန်မာ မိဘတွေနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျင် အလွန်သိသာပါသည်။ တစ်ခါသား မြန်မာ ခလေးတစ်ယောက် ရှော့ပင်းစင်တာတွင် လိုတာမရ၍ လူးလိမ့်ကာ ငိုနေသည်ကို မြင်ဖူးပါသည်။
သမီးလေးရလာတော့ အလွန်ပျော်ပါသည်။ အလွန်လည်းချစ်ပါသည်။ သမီးနဲနဲသိတတ်လာတော့ ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အတိုင်း စည်းကမ်းကိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ တုတ်သုံးတန်သုံးကာ ခြောက်ရသည်။ တစ်ခါက သမီးကိုရိုက်မိပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ တစ်ညလုံး အိပ်မပျော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ ထိုနောက်ပိုင်း တုတ်မကိုင်မိအောင်ကြိုးစားသည်။ သမီးလေးကို မရိုက်ရက်တော့။
အခုတစ်လော သမီးမျက်ရည်အလွန်လွယ်နေသည်။ တစ်ခုခုမရလျင်၊ အလိုမကျရင် မျက်ရည်က အရင်ကျနှင့်ပြီ။ ဒီက မဆွိတီကလည်း အမေ့သမီးပေပဲ။ ဘာသားနှင့်ထုထားသည်မှို့လဲ။ သမီးမျက်ရည်ကျမှာကြောက်လို့ အလိုလိုက်ခဲ့ရသည်သာ များပါသည်။ အလျင်က သားသမီးရလျှင်တော့ စည်းကမ်းကိုင်မဟဲ့ဆို မောင်းတင်ထားတာတွေ တဖြေးဖြေးပျောက်ကုန်လေပြီ။ မဆွိတီ၏ သံဓိဋ္ဌာန်များ သမီး၏ မျက်ရည်များနဲ့ အရည်ပျော်ခဲ့လေပြီလား။
" သမီး ... ဒီဆော့ဆေ့လေးနဲ့ ... ဒီဥဥ ဟပ်ဖရိုက်လေးနဲ့ နွေးနွေးလေး ... စားလိုက်နော် ... သမီး ..."
" ဂျူဂျူ စားချင်ဝူး ..."
" စားလိုက်ပါသမီးရယ် ... သမီး အစာစားမှအားရှိမှာ ... ဒါမှ ၀၀ကစ်ကစ်လေးဖြစ်မှာ ... ဟိုအောက်ထပ်က မမဒိုရာကိုကြည့်စမ်း ၀ကစ်နေတာပဲ ... သူက အများကြီး စားတာ သမီးရဲ့... စားနော်"
"စားချင်ပါဝူးဆို ... မေမေကလဲ ... "
" အဲဒါဆို ... မေမေ ... chicken wing လေး ကြော်လိုက်မယ်လေ ... "
" ဒါဆို KFC က အာလူးအကြေမျိုးလေး မေမေလုပ်ပေးမယ်လေ ... စားမလား ..."
" No ... I don't want it ..."
" ဒါဆို ပေါင်မုန့်မှာ စတော်ဘယ်ရီးယိုလေး တစ်ဖက် ... ထောပတ်လေးတစ်ဖက်သုတ်ပေးမယ်လေ ... သမီး ... စားလိုက်နော် ..."
"ဒါဆို ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. .... ... .."
" ဒါဆို ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .. .... ... .."
(ဂျူဂျူ ၅နှစ်သမီးလောက်က ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ခုတော့ ဂျူဂျူ အရမ်းတော့ မဆိုးတော့ဘူး။ ဆုံးမရင် နားလည်နေပါပြီ။ အစားအသောက်တော့ ချေးများတုံးပါ)
Posted by T T Sweet at 12:18 PM 24 comments:
အန်တီဆွိ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ရေးခဲပါတယ်။ ဒီပို့စ်လေးကတော့ ရုံးမှာ ပြသနာလေးတစ်ခုက သင်္ခန်းစာ ယူစရာလေးရှိလို့ ရေးဖူးတာလေး ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ။
မဆွိတီတို့ရုံးမှာ ခုလောလောဆည် Industrial PDA တွေ ဒီဇိုင်းလုပ်တယ်။ ကိုယ်က ပရောဂျက်တစ်ခုမှာ Mechanical ဒီဇိုင်းအတွက် တာဝန်ယူရတယ်။ အခုလောလောဆယ် ပထမစမ်းထုတ်အဆင့် (Alpha Build) အတွက်ပြင်ဆင်နေရတဲ့ အချိန်။ ဒီ့အရင် Prototype (အစမ်းထုတ်) ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂လလောက်ကပဲ ပြီးသွားပြီးဖြစ်လို့ အမှား ပြင်စရာလေးတွေရှိတာလဲ ပြင်ပြီးသွားပါပြီ။
မြင်ဘူးကြမှာပါ။ PDA ပဲဖြစ်ဖြစ် Hand Phone ပဲဖြစ်ဖြစ် Key လေးတွေရဲ့ ပတ်ပတ်လည်မှာ back light လို့ခေါ်တဲ့ အလင်းရောင်လေးတွေ ဖြစ်အောင် နောက်ကနေ LED တွေ အများကြီးနဲ့ ထွန်းပေးထားရတာ။ အမှောင်ထဲမှာလဲ Key လေးတွေကို ခွဲမြင်နိူင်အောင်လို့။ ဒီဇိုင်းလုပ်ကထဲက တမင်လုပ်ထားလေ့ရှိကြတယ်။ တစ်ချို့ဒီဇိုင်းတွေကလဲ အဲလိုဖြစ်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ကပေါ့။ ကိုယ့်ကို အ၀ယ်ဋ္ဌာနက ကောင်မလေးက လာပြောတယ်။ မနက်က Keypad လုပ်တဲ့ vendor လာသွားသတဲ့။ ကိုယ်ကသူ့နဲ့ တွေ့ဖို့ ပြောထားတာဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့ မတွေ့ပဲ ဘယ်သူနဲ့များတွေ့ပြီး ပြန်သွားလဲမေးတော့ Quality ဋ္ဌာနက အင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆိုပဲ။ အဲဒီ QE (Quality Engineer) က ဒီပရောဂျက်အတွက် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အထူးတာဝန်ယူရသူပေါ့။
ဒါနဲ့ကိုယ်ကလဲ အဲဒီအင်ဂျင်နီယာကို သွားတွေ့ပြီး ဘာကိစ္စအတွက် Vendor ကို တွေ့တာလဲ မေးတော့ သူက keypad rSm light leakage (အလင်းတွေ အပြင်ကို ယိုစိမ့်ထွက်)နေလို့ နောက်ကခံပြီး ကာဖို့အတွက် အနက်ရောင် ဖလင်ပြားတစ်ခု လုပ်ပေးဖို့ ပြောလိုက်တယ်ဆိုပဲ။ အဲသမှာကိုယ် အတော်စိတ်တိုသွားတယ်။ သူပြောတဲ့ အကြောင်းအရာ ပြဿနာထက် ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းကို ဘာမသိ၊ ညာမသိ၊ ဘုမသိ ဘမသိနဲ့ ဖလင်ပြားတစ်ခု ထပ်ခံဖို့ဆိုတော့လေ။ ကိုယ်ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီ Keypad ဒီဇိုင်းမှာ ဘာပစ္စည်းမှ ထပ်ထည့်လို့မရတော့ဘူး။ 0.01mm ရှိတဲ့ ပစ္စည်းတောင် ထပ်ထည့်လို့မရဘူး။ အဲလိုထပ်ထည့်ချင်ရင် အခုလို လက်လွတ်စပယ် လုပ်လို့မရဘူး။ အကုန်လုံးပြန်စစ်ဆေး လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ အများကြီးလုပ်ရမယ်ဆို၊ ကိုယ်စကားဆုံးအောင်တောင် မစောင့်ဘူး။ ဒါက သူစမ်းသပ်ကြည့်ချင်တာလေး သတ်သတ်ပါ။ အခုလောလောဆယ်လည်း လုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ ကိုယ်လဲ လေကုန်ခံပြီး ထပ်ပြောမနေတော့ဘူးပေါ့။
ဟိုနေ့က ခွင့်တရက်ယူပြီး ရုံးပြန်တက်တဲ့နေ့ ပြသနာက ဆီးကြိုနေပါပြီ။ ကိုယ့်ကို Project Manager (ပြင်သစ်လူမျိုး ) အဖြူက လာမေးတယ်။ QE စမ်းသပ်ထားတဲ့ light leakage အလင်းယိုစိမ့်ထွက်တာ ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဖလင် ဒီဇိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေ လုပ်ထားလဲတဲ့။ ဒီ Alpha Build အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ အကုန်လုပ်ပြီးပလားတဲ့။ ပြောရရင် ကိုယ်တို့ရုံးမှာလဲ politics တွေက အများကြီး ။ သူတို့ ပရောဂျက်ဋ္ဌာနနဲ့ ကိုယ်တို့ ME ဋ္ဌာနက မန်နေဂျာအချင်းချင်း ချိတ်ကလေးတွေ ငြိထားတာရှိလေတော့ သူတို့က အစကတည်းက ပြဿနာ ရှာချင်နေတာ။
ကိုယ်တောင်ဘာမှမမှားပဲနဲ့ ကိုယ့်ကို လေသံမာမာနဲ့ လာမေးနေတော့ ကိုယ်ကလဲ အမြင်ကပ်ကပ်ရှိလှနဲ့ ဘာမှလုပ်မထားဘူး။ အဲဒီအတွက် ဘာမှ မစဉ်းစားရသေးဘူးလို့ အမှန်အတိုင်း ဘုတောလိုက်တယ်။ ဒီတော့ အဲဒီအဖြူက ကိုယ့်မန်နေဂျာရယ်၊ ကိုယ်ရယ်၊ Optical အင်ဂျင်နီယာရယ်၊ QE နဲ့ သူ့မန်နေဂျာကို ခေါ်ပြီး အစည်းအဝေးခေါ် မေးပါလေရော။ အဲဒီတော့မှ ဖြစ်ကြောင်းရယ်တဲ့ကုန်စင် သိလိုက်ရတာက အဲဒီ QE ဟာ နားမလည် ပါးမလည်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ မတိုင်ပင်၊ အရင်က history တွေကိုလဲမသိဘဲ သူ့ဟာသူအထင်နဲ့ ကျိတ်လုပ်နေတာ။ ဒီဇိုင်းက တမင်ကို Key တွေ ပတ်ပတ်လည်မှာ လင်းနေအောင် လုပ်ထားတာကို Light leakage ဆိုပြီး သူ့ဟာသူ အနက်ရောင်ဖလင်ပြားခံ၊ ပြီးတော့ Marketing က မန်နေဂျာကို သွားပြတယ်။ အဲဒီကတဆင့် အဲဒီစမ်းသပ်ထားတဲ့ PDA ဟာ ဒါရိုက်တာတွေလက်ထဲ ရောက်သွားတယ်။ အထက်ကလူတွေကလဲ သေချာမသိပဲနဲ့ ကောင်းတယ်။ တိုးတက်လာတယ် ဘာညာတွေဖြစ်ပြီး ကိုယ်တို့ သေချာလုပ်ထားတဲ့ ဒီဇိုင်းဟာ တမင် မဟုတ်ပဲနဲ့ တကယ်ကို Light leakage ဖြစ်တဲ့ မှားနေတဲ့ ဒီဇိုင်းကြီးဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်သွားပါလေရောဗျာ။
ကိုယ်တွေက အဲဒီအဖြူကို သေချာပြောပြ၊ ရှင်းပြပေမဲ့ သူက အစထဲက အညှိုးရှိသူဆိုတော့ သူ့ E ကောင်းကောင်းနဲ့ ငါ့စကားနွားရ တွေပြောပြီး ဘယ်လိုမှကို ရှင်းလို့ မရနိူင်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ဘက်ကို မလိုက်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်တို့ကအရင် prototype မော်ဒယ်ကို customer ဆီ ပို့ခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှ မှတ်ချက်မပေးခဲ့ဘူး။ ပရောဂျက်က မပြီးသေးတော့ Product spec ထဲမှာလဲ အဲဒီကိစ္စကို သေချာ မရေးထားဘူး။ ပါးစပ်နဲ့ပဲ ပြောဖူးတာ။ ပြသနာက Marketing မန်နေဂျာ ကိုယ်တိုင်က light leakage ဖြစ်နေတယ်ပဲပြောနေတယ်။
အဲဒီ ဒီဇိုင်း က Light leakage မဟုတ်ဘူး။ ဒီဇိုင်းကိုက ဒီအတိုင်းပဲဆို အတိုက်အခံ ငြင်းပေမဲ့ သူက Marketing ဆိုတာ internal customer ပဲ။ သူပြောတာ နားထောင်ရမယ် ဆိုပြီး ပြောတယ်။ ကိုယ့်မန်နေဂျာကလဲ အတော်စိတ်ညစ်နေပြီး ဘာမှဝင်မပြောတော့တာနဲ့ နောက်ဆုံး အငြင်းအခုန်ကို ရပ်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ ကိုယ့်မန်နေဂျာကိုလဲ R&D က division manager က ခေါ်ဆူပြီး လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကို ၂၄ နာရီ အတွင်းပြီးအောင် လုပ်ဖို့ မှာကြားလိုက်ပါလေရော။
ကိုယ်တို့မန်နေဂျာပြောတဲ့အတိုင်း Alpha Build အတွက် Customer ကို ပြဖို့လောက်ပဲ PDA ၃-၄ ခုစာလောက်အတွက် ဒီဇိုင်းကို စဉ်းစားကြရတော့တယ်။ ကိုယ်တို့ ME တွေအားလုံးခေါ် brain storm section လေးလုပ်ရင်း ရလာတဲ့ အကြံဥာဏ်လေးအတိုင်း ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို Keypad vendor ကိုမှာပြီး အဲဒီနေ့ပဲ ကမန်းကတန်းပြီးအောင် ဒီဇိုင်းလုပ်လိုက်ရတယ်။ လူလဲ အတော်မောသွားတယ်။ ကျေလဲ မကျေနပ်ဘူးပေါ့။
နောက်တစ်နေ့ စောစောစီးစီး ရုံးရောက် email လေးဖွင့်ဖတ်လိုက်တော့ တွေ့ပါပြီ။ Marketing manager ဆီက email ။ သူတို့ မနေ့ညက customer နဲ့ tele conference လုပ်တော့ customer ကပြောပါသတဲ့။ prototype တုံးက သူတို့ မှတ်မိပါသတဲ့။ Key တွေ ပတ်ပတ်လည်က အလင်းရောင်လေးတွေ လင်းနေတာ design intent သာဖြစ်ပါကြောင်း၊ အဲဒီ ဒီဇိုင်းအတိုင်းလိုချင်တာသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
နောက်ဆုံးတော့ အဖြေက ကိုယ် Project Manager ကို ပြောခဲ့တာနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှပါပဲ။ ဒီတော့ အဲဒီ ကိစ္စက totally false alarm ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဒါရိုက်တာတွေပါ သိသွားပြီး ပြသနာကတော့ ပြီးသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပြဿနာမှာ အများဆုံး suffer ဖြစ်ရတာက ကိုယ်နဲ့ optical အင်ဂျင်နီယာရယ်၊ ကိုယ့်မန်နေဂျာရယ်။
ပထမအပြစ်က QE အင်ဂျင်နီယာ။ သူ့ကို အခုစလုံးမှာပြောနေသလို ပြောရရင် သူဟာ ကေပို ပါ။ ကေပိုဆိုတာ တရုတ်လို ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် မလုပ်ပဲ သူများအလုပ်ကို ဘုမသိ ဘမသိ ၀င်လျှာရှည်ချင်တာ။ နောက် သူလုပ်ပြတဲ့အရာက ok သွားရင် သူ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီး နာမည်ကောင်းလိုချင်တာက အဓိကပါ။ သူဟာ အရင်ထဲက ရုံးမှာ ဒီလိုနာမည်ရထားသူပါ။ သူသာ ကေပို မလုပ်ရင် ဒီပြဿနာ ဖြစ်စရာကို အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နားမလည်ရင် ကိုယ့်အပိုင်းမဟုတ်ရင် ၀င်မလုပ်တာ အကောင်းဆုံး။ ၀င်လုပ်ရင်တောင် အရင် history တွေကို လေ့လာထားရမယ် ။ နားလည်ထားရမယ်။ တာဝန်ရှိသူနဲ့ တိုင်ပင်ရမယ်။
ဒုတိယက marketing ဋ္ဌာနက မန်နေဂျာနဲ့ project မန်နေဂျာ။ QE က ပြုပြင်ထားတဲ့ Keypad နဲ့ PDA လေးပြလိုက်တာနဲ့ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဒီပြင်ထားတာက ပိုကောင်းတယ်။ အရင်ဒီဇိုင်းကြီးက အမှားကြီးလို့ ထင်သွားတယ်။ သူတို့ဆီမှာ customer ဆီက feedback တွေ ရှိပါရက်နဲ့ အရင် ဒီဇိုင်းကို မှားနေတယ်လို့ သူတို့ဟာသူတို့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေရာကနေ တကယ်ကို မှားသလိုလိုလုပ်ပြီး ဒီဇိုင်းအသစ်အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ မှားတာဟာ သူ့တို့အနေနဲ့တော့ မသိဘူး။ ကိုယ်သာသူ့နေရာမှာဆို အင်မတန်ရှက်မိမှာ။ သူ့အလုပ်ကိုသူ သေချာမကျွမ်းကျင်ဘူး ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ၀ိုးတိုးဝါးတား ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်မနေသင့်ဘူး။
တတိယက ကိုယ့်အပြစ်။ QE က အခုလို ကိုယ့်ကို ကျော်ပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်နေတာကို သေချာမတားနိူင်ခဲ့ဘူး။ ကိုယ်မနိူင်ရင် ကိုယ့်အထက်အရာရှိကို ပြောရမှာကိုလည်း မပြောခဲ့ဘူး။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်တို့ဋ္ဌာနက လူတွေရဲ့ စကားစစ်ထိုးရာမှာ ချက်ကျကျနဲ့ နိူင်အောင် ပြန်မပြောနိူင်တာ။ ထစ်ကနဲရှိ စိတ်ကို မထိမ်းနိူင်ခဲ့ပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှင်းပြပဲနဲ့ စိတ်တွေတိုနေခဲ့ကြတဲ့ အပြစ်တွေ။ ကိုယ်သာအစကထဲက ဘုမတောပဲ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောခဲ့ရင် project မန်နေဂျာက ကိုယ့်ဘက်က နည်းနည်းလောက်တော့ ငဲ့ ကြည့်ပေးမယ်၊ စဉ်းစားပေးမယ်လို့ ထင်တယ်လေ။ (မကောင်းတဲ့ အချက်က အန်တီဆွိဟာ အပြင်မှာ သဘောကောင်းသလောက် အလုပ်ထဲမှာ အင်မတန် စွာပါတယ်ခင်ညာ)
(အဲဒီ product လေး launch လုပ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ XG100 ဆို Google လိုက်ရင် ထွက်လာမှာပါ။ အဲဒီ Product နဲ့ အန်တီဆွိလဲ patent တစ်ခု ရခဲ့ပါတယ်။ အရင်က Motorola /Symbol အတွက် Industrial PDA တွေ ဒီဇိုင်းလုပ်ခဲ့ပြီး ခု Janam ဆိုတာကလဲ Motorola ပြုတ်ပြီး အဲဒီက director တစ်ချို့ ပြန်ထောင်ထားတဲ့ ကုမဏီပါ။ US ကုမဏီတွေပါ။ စလုံးက R&D မှာ ဒီဇိုင်းလုပ်ပါတယ်။ )
မဆွိတီတို့ ME group ခရစ်စမတ် ညစာစားပွဲ တစ်ခုမှာ အမှတ်တရ ရိုက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by T T Sweet at 1:31 PM 21 comments:
Labels: အလုပ်အတွေ့ အကြုံ
Blue mountain သို့ အလည်တစ်ခေါက်
Blue mountain ဟူသည် ဆစ်ဒနီမြို့ အနောက်ဖက် ကီလို ၅၀လောက်အကွာရှိ တောင်ကုန်းတောင်တန်းထူထပ်ရာ အရပ်ကိုခေါ်ပါသည်။ ၎င်းအပြာရောင်တောင်တန်းများသည် မြို့ရဲ့ နယ်နိမိတ်အဖြစ် ကာရံထားသကဲ့သို့ပင် ရှိနေပါသည်။ တောတောင်များဖြင့် ရှူခင်းသာယာလှပရာ အများအားဖြင့် အပန်းဖြေရန် သွားကြပါသည်။
ကားဖြင့်မောင်းပါက ၉၀ ကီလိုမီတာခန့် မောင်းရပါသည်။ မနက် ၁၀နာရီခန့် အိမ်မှ ထွက်ခဲ့ကြသည်။ ရာသီဥတုမှာ ထုံးစံအတိုင်း အားကစားသမားများအကြိုက် ရာသီဥတုဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားစူး Spring ဟု ကျိန်ပြောရတော့မည်။ ပြိုမှာလေလား မိုးရယ်။
M4 Motor way မှတဆင့် Great Western ဟိုင်းဝေးတစ်လျှောက် သွားကြရာ လမ်းခရီးမှ ရှူခင်းများမှာလည်း အင်္ဂလိပ် တောရွာ (country) ကို ဖြတ်သွားရသလို ရှူခင်းသာယာလှပပါသည်။ Woodford မြို့ ဖြစ်ပါသည်။
Blue mountain ရှိရာ Katoomba မြို့ထဲသို့ ၀င်လာပါပြီ။
မြို့ထဲမှ တစ်ကီလိုခန့်ထပ်မောင်းလျှင် Blue mountain ရှူခင်းသာသို့ ရောက်ပါပြီ။ ဆစ်ဒ်နီတွင်ရှိစဉ် ဦးခြိမ့်မှာ weather report ကြည့်ထားရာBlue Mountain တွင် ၃၀ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်၊ အနွေးထည်များ သယ်ရန် မလိုဟု ဆိုပါသည်။ ချမ်းတတ်သော အန်တီဆွိမှ ပိုပိုလိုလို အနွေးထည်အထူများ သယ်လာရာ တော်ပေသေးသည်။ အပူချိ်န်မှာ ၁၀ဒီဂရီသာရှိရာ ယခုအခါ ညက်မှောင်ကျုတ်ကြီးဖြင့် သူ့အား တဖန်ပြန်လည် ကြည့်နိူင်ခဲ့ပါပြီ။ (လက်ခုတ်တီးကြပါ အန်တီဆွိပိတ်သတ်တို့း)
အဲလစ်ဇဘတ် ဘုရင်မကြီး လာလည်စဉ်က ကြည့်ရှူ့ခဲ့သော နေရာဖြစ်ပါသတဲ့။
နာမည်ကျော် The Three Sisters တောင် ဖြစ်ပါသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၃၀၀၀ကျော်မြင့်ပါသည်။ Three Sisters ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ ရှေးမြန်မာ ပုံပြင်များကဲသို့ ဒဏ္ဍာရီ ဆန်လှပါသည်။ Katoomba နယ်မှ ရုပ်ရည် ချောမောလှပသော Aboriginal ညီအစ်မ ၃ယောက်ရှိရာ Nepean နယ်မှ ညီအကို ၃ယောက်နှင့် ချစ်ကြိုက်မိကြသည်။ သို့ပေမဲ့ နယ်မြေ တရားဥပဒေအရ ညီအကို ၃ယောက်က ထိုညီအစ်မ၃ယောက်ကို လက်ထပ်ခွင့်မရှိကြရာ အင်အားသုံး၍ သိမ်းပိုက်ရန် ကြံစည်ကြရင်း နယ်မြေနှစ်ခုကြား စစ်မက်ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်။
စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ် ညီအစ်မ၃ယောက်မှာ အကြီးအကျယ် ဒုက္ခရောက်နေရာ ကတ်တွန်းဘားနယ်မှ စုန်းဆရာက ညီအစ်မသုံးဦး မထိခိုက်ရအောင်ဆိုကာ မန်းမှုတ်လိုက်ရာ ညီအစ်မသုံးဦးလုံး ကျောက်တောင်တွေအဖြစ် အသွင်ပြောင်းသွားကြလေသတဲ့။ လူ့အသွင်ပြန်ပြောင်းဖို့ မန်းမှုတ်ဖို့ အချိန်မရောက်ခင်မှာပဲ စုန်းဆရာ ကိုယ်တိုင် အသတ်ခံလိုက်ရပြီး စစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ညီအစ်မသုံးယောက်လုံး ကျောက်တောင်တွေအဖြစ်နဲ့ ယခုတိုင် ကျန်ရစ်ကြပါသတဲ့။ စိတ်ဝင်စားစရာ စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ ဒဏ္ဍာရီလေးပါ။
Three sisters သို့ တောလမ်းလေးမှ သွားကြသည်။ ဘယ်ဘက် အစွန်ဆုံး တောင်ထွတ်လေးဆီသို့ သွားကြခြင်းဖြစ်သည်။ ငယ်ငယ်က ကျိုက်ထီးရိုး တက်ရတာတောင် သတိရသွားသည်။
ဒါကတော့ ဂျူဂျူ့အမေ ဂိုက်ပေးကြမ်းနေတာ။ သည်းခံသာကြည့်ကြပါ ပိတ်သတ်တို့ရေ။
အလန်ကွာတာဆွိ၏ စွန့်စားခန်းများ။း)
ပုပါးမှာကဲ့သို့ သံလှေခါးနှင့်ဆင်းရသည်။ အလွန်ပင်မတ်စောက်ရာ ခလေးများကို သတိထားတွဲခေါ်ရသည်။
သံလှေခါးမှ ဆင်းဆင်းချင်း တံတားလေးကိုကျော်လျှင် ကျီးကန်း ပါးစပ်ကဲ့သို့ တောင်ထွတ် အငူလေးထဲသို့ ရောက်ပါသည်။ စုစုပေါင်း ၁၀မိနစ်ခန့် လျှောက်ခဲ့ရပါသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာက မြေငလျှင်ဒါဏ်ကြောင့် ပြတ်သွားခဲ့သော ပြတ်ရွေ့တောင်ကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။
အပြန်ကျတော့ အတက်ဖြစ်ရာ လှေခါးများကို မုန်းသော အန်တီဆွိမှာ အတော်ပင် ကြိုးစားပမ်းစား တက်ရပါသည်။ ခြေထောက်ကညောင်း၊ လူကမောနှင့် အလွန်ပင်ပမ်းပါသည်။ အားလုံးကိုယ့်ကို ကျော်တက်ကုန်ရာ ဘေးမှ ညက်ခုံးကျုံ့ကြီး စောင့်ခေါ်နေပေး၍ တော်ပေတော့သည်။
အပြန် Scenic World မှာ နေ့လည်စာ ၀င်စားကြသည်။ အ၀င်ဝမှာ ညီအစ်မ ၃ဖော်နှင့် သူတို့၏ ဖခင်ပုံကို ထုလုပ်ထားသည်။
တောင်များတစ်ခုမှ တစ်ခုဆီသို့ cable car များဖြင့် သွားနိူင်သည်။ မဆွိတီတို့မှာ အပြန်ဧည့်သည်ကို ခရီးဆက်ပို့စရာရှိသေး၍ အချိန်မရတော့သည်ဖြစ်ရာ cable car တော့ မစီးခဲ့ရပါ။
ရှုခင်းများကို Scenic World မှ ထပ်မံကြည့်ရှူကာ ညနေ ၃နာရီခွဲခန့် ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။
Posted by T T Sweet at 2:32 PM 21 comments:
Labels: ခရီးသွား မှတ်တမ်း ..., အော်စီနဲ့ ပတ်သတ်သမျှ ...